Ọ bụghị n'okpuru Iwu - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Ọ bụghị n'okpuru Iwu
Ọ bụghị imebi iwu n’ihu Chineke kama n’okpuru iwu nke Kraịst, 1Kọ 9: 20-21
Jesus ọkwọrọ ikọ ọnọ Naaman ye ebeakpa Zarephath
Ụkpụrụ Jizọs nke izu okè
Jizọs jụrụ iwu
Ọ bụrụ na mmụọ nsọ na -edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu
Anyị nọ n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ site n'aka Kraịst
Ọ bụ ezie na anyị anaghị eso iwu Mozis, anyị abụghị ndị mmebi iwu n'ihu Chineke
Iwu Mozis bụ onyinyo nke ihe ndị gaje ịbịa
Jizọs bụ onye ogbugbo ọhụrụ na onye na -enye iwu kwesịrị ka a kwanyere ya ugwu karịa Mozis
Akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi na -ekwusa Kraịst (ọ bụghị iwu)
Pọl kwusara ozi ọma megide iwu Mosis
Okwukwe, ọ bụghị iwu, na -eme ka anyị bụrụ ndị ezi omume
Amaokwu ndị dị mkpa n'asụsụ Hibru gbasara Iwu ahụ (Peshitta, Nsụgharị Lamsa)
Ozugbo Jizọs malitere ije-ozị ya mgbe o kwusasịrị na Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n’ahụ ya, na Luk 4:25–29, o zoro aka kpọmkwem n’akụkọ banyere Neaman (2 Ndị Eze 5:8–19) na nwanyị di ya nwụrụ nke Zarefat (1 Ndị Eze). 17:8-16) Ha abụọ na-abụghị ndị Juu na-akwadoghị iwu. O kwuru, sị: “N’ezie, a sị m unu, e nwere ọtụtụ ndị inyom di ha nwụrụ n’Izrel n’oge Ịlaịja, mgbe e mechiri eluigwe afọ atọ na ọnwa isii, oké ụnwụ wee daa n’ala ahụ dum, e zitekwa Ịlaịja. ọ dighi onye ọ bula nime ha, ma-ọbughi nání Zarefat, nke di n'ala Saidon, nyegara otù nwanyi di-ya nwuru. Ma ọtụtụ ndị ekpenta dị n’Izrel n’oge Ịlaịsha onye amụma, ọ dịghịkwa otu n’ime ha e mere ka ha dị ọcha ma e wezụga Neaman onye Siria.” ( Luk 4:25-27 ) Nke a iwe were ndị Farisii nke ukwuu mgbe ha were oke iwe wee chọọ ịchụpụ ya n'obodo ma tụpụ ya n'elu ugwu. Echiche nke Chineke imere ndị na -anọghị n'okpuru iwu bụ ihe arụ n'anya ọtụtụ ndị Jizọs zutere.
(Luk 4: 25-29) Iwe juru ndị niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ anya
25 Ma n’ezie, a sị m gị, e nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị di ha nwụrụ n’Izrel n’oge e mechiri eluigwe ka afọ atọ na ọnwa isii, oké ụnwụ wee daa n’elu ụwa dum, 26 ma e zigaraghị Ịlaịja onye ọzọ ma -ọbụghị ọ bụ naanị Zarefat nke dị na Saịdọn, nye nwanyị di ya nwụrụ. 27 E nwekwara ọtụtụ ndị ekpenta n'Izrel n'oge Ịlaịsha onye amụma, ọ dịghịkwa onye n'ime ha dị ọcha, kama naanị Neaman onye Siria. " 28 Mgbe ha nụrụ ihe ndị a, iwe were ndị niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ. 29 Ha we bilie, chupu ya n'obodo, kuru ya bia na nsọtu ugwu nke ewuru obodo -ha, ka ha we tuda ya na nkume di elu..
Mgbe otu nwoke bara ọgaranya jụrụ Jizọs na Matiu 19:16-21, “Olee ezi ọrụ m ga-eme ka m wee nweta ndụ ebighị ebi,” ọ sịrị, “Ọ bụrụ na ị ga-aba na ndụ, debe iwu-nsọ nile.” Ma mgbe a jụrụ Jizọs ajụjụ banyere ndị, o kwughị ha niile ma ọ bụ iwu Mozis dum. Naanị iwu isii ka o kwuru. Ise n'ime ha sitere n'iwu iri ahụ nke gụnyere, Egbula mmadụ, Akwala iko, Ezula ori, agbala akaebe ụgha, sọpụrụ nna na nne gị, ọ gbakwụnyere, 'Hụ onye agbata obi gị n'anya. dị ka onwe gị.' Kama ịrịọ maka iwu ahụ dum, ọ gara n'òtù iwu a họọrọ nke kwekọrọ n'ozizi ezi omume ya.
Nwoke ahu we si, Ihe ndia nile ka m'debere, gini ka fọduru m? Jizọs kwukwara na Matiu 19:21, sị: “Ọ bụrụ na ị ga-ezu okè, gaa ree ihe i nwere nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ̀ n’eluigwe; bịakwa, soro m.” N'ebe a, anyị na-ahụ ụkpụrụ Jizọs abụghị n'ozuzu Iwu Mosis kama ọ bụ ndị bụ isi nke iwu Chineke nke metụtara ịhụ ụmụ mmadụ n'anya na ibi ndụ achọghị ọdịmma onwe onye nanị. Ọ bụrụ na Jizọs ekwere na narị isii na iri na atọ e nyere n’iwu Mozis dị oké njọ, nke a gaara abụwo ohere zuru okè ikwu otú ahụ. Kama nke ahụ, iwu Jizọs nyere bụ ilekwasị anya n'ụkpụrụ nke ịdị mma bụ́ ndị metụtara ịhụnanya na ọrụ ebere. Ụkpụrụ nke izu okè nke Jisọs bụ ibi ndụ achọghị ọdịmma onwe onye nanị dị ka ohu – ọ bụghị imezu iwu nke Mosis.
Matiu 19: 16-21 Ọ bụrụ na ị ga -ezu oke
16 Ma le, otù nwoke biakutere Ya, si, Onye -ozizí, ọ̀ bu ezi ọlu ka m'g dome ka m'we nwe ndu ebighi -ebi? 17 O we si ya, Gini mere i nājum ajuju bayere ezi ihe? Ọ bụ naanị otu onye dị mma. Ọ bụrụ na ị ga -abata ndụ, debe ihe enyere n'iwu. ” 18 Ọ jụrụ ya, "Olee ndị?" Jizọs wee sị, "Egbula ọchụ, Akwala iko, Akwala ohi, Agbala akaebe ụgha, 19 Sọpụrụ nna gị na nne gị, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. " 20 Nwa okorobịa ahụ sịrị ya, “Ihe ndị a niile ka m debere. Kedu ihe fọdụụrụ m? ” 21 Jizọs sịrị ya, “Ọ bụrụ na ị ga -ezu oke, gaa ree ihe niile i nwere nye ndị ogbenye, ị ga -enwekwa akụ n'eluigwe; bia, sorom. "
Anyị kwesịrị ịnụ ma ghọta dịka Jizọs kwuru, “Ọ bụghị ihe na-abanye n’ọnụ na-emerụ mmadụ, kama ọ bụ ihe na-esi n’ọnụ pụta; nke a na-emerụ mmadụ.” ( Mat. 15:10-11 ) N’ikwu nke a, o kwuru na ihe oriri niile dị ọcha. (Mak 7:19) Okwu a kpasuru ndị Farisii iwe, ma Jizọs kwuru banyere ha, sị: “Ha bụ ndị nduzi kpuru—ọ bụrụkwa na ndị ìsì eduo ndị ìsì, ha abụọ ga-adaba n’olulu. (Matiu 15:12-14) Ihe ọ bụla nke na-abanye n’ọnụ na-abanye n’ime afọ, a na-achụpụkwa ya—ma ihe na-esi n’ọnụ pụta na-esi n’obi pụta, nke a na-emerụkwa mmadụ. (Matiu 15:17-18) N’ihi na n’obi ka echiche ọjọọ, igbu ọchụ, ịkwa iko, ịkwa iko, izu ohi, ịgba àmà ụgha, nkwutọ, si apụta—ndị a bụ ihe na-emerụ mmadụ.” ( Mat. 15:19-20 ) Jizọs kwuru, sị: “Lezienụ anya ma kpachara anya maka ihe iko achịcha nke ndị Farisii na ndị Sadusii” na-ezo aka n’ozizi ha. ( Matiu 16:6-12 ) O kwuru banyere ha na ha na-ekwusa ozi ọma, ma ha adịghị eme ya—ha na-ekekọta ibu dị arọ nke siri ike iburu, na-atụkwasịkwa ha n’ubu ndị mmadụ. ( Matiu 23:1-4 ) Ahụhụ ga-adịrị ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ha dị ka ili e tere mmanụ, bụ́ ndị na-egosi na ha mara mma n’elu, ma n’ime juputara n’ọkpụkpụ nke ndị nwụrụ anwụ na adịghị ọcha niile—ndị na-egosi na ha bụ ndị ezi omume n’ihu ndị ọzọ, ma n’ime ha juru eju. nke ihu abụọ na mmebi iwu. (Matiu 23:27-28). Ọ dịghị ihe e kpuchiri ekpuchi nke a na-agaghị ekpughe ma ọ bụ zoro ezo nke a na-agaghị ama. (Luk 12:1-3)
Mgbe a jụrụ ya, "Olee nke bụ nnukwu iwu n'ime Iwu ahụ?" Jizọs zara, sị: “Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke abụọ dị ka ya: Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị - n'iwu abụọ a ka iwu nile na ndị amụma dabeere." (Matiu 22:36-40) Jizọs sịrị: “Na-ahụnụ ndị iro unu n’anya, meekwanụ ezi ihe, na-agbanyekwanụ ihe n’atụghị egwu n’ụzọ ọ bụla, ụgwọ ọrụ unu ga-adịkwa ukwuu, unu ga-abụkwa ụmụ nke Onye Kasị Elu, n’ihi na ọ na-emere ebere. ndị na-enweghị ekele na ndị ọjọọ. ( Luk 6:35 ) Unu ga-eme ebere, ọbụna dị ka Nna unu nwere obi ebere.” ( Luk 6:36 ) Iwu ọhụrụ o nyere bụ, “ka unu na-ahụrịta ibe unu n’anya: dị nnọọ ka m hụworo unu n’anya, ka unu na-ahụkwarịta ibe unu n’anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.” ( Jọn 13:34-35 ) Jizọs sịrị: “Nọgidenụ n’ịhụnanya m. Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n’iwu, unu ga-anọgide n’ịhụnanya m, dị nnọọ ka m debeworo ihe Nna m nyere n’iwu wee nọgide n’ịhụnanya ya.” ( Jọn 15:9-10 ) Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Nke a bụ iwu m, ka unu na-ahụrịta ibe unu n’anya dị ka m hụworo unu n’anya.” (Jọn 15:12)
Jizọs kwusiri ike n'ịhụnanya karịa iwu ọ bụla gụnyere ịhụ ndị iro gị n'anya na ikpe ekpere maka ndị na -akpagbu gị. (Matiu 5: 43-45) Anyị agaghị ekpe ikpe, ka a ghara ikpe anyị ikpe-n'ihi na ikpe anyị na-ekwu ga-ekpe anyị ikpe, ihe anyị jikwa ya ka a ga-eji tụọ anyị. (Matt 7: 1-2) Mgbe anyị na-ekpe ekpere, anyị kwesịrị ịgbaghara ndị mehiere anyị, ka Chineke wee gbaghara anyị njehie anyị. (Mat 6:12, Luk 11: 4) Ọnụ ụzọ dị warara bụ ime ndị ọzọ dịka ị ga -achọ ka ndị ọzọ mee gị, nke a bụ Iwu na Ndị Amụma. (Mat 7:12) Jizọs abịaghị ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie dị ka ụkpụrụ si dị, 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà.' (Matiu 9:13) Jizọs kpọrọ ndị na -adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị na -anyịgbu ibu na -asị, “M ga -eme ka unu zuo ike - nyaranụ yoke m, n'ihi na adị m nwayọọ, dịkwa umeala n'obi, unu ga -achọtakwa izu ike nye mkpụrụ obi unu. yoke m dị mfe, ibu m dịkwa nfe. ” (Mat 11: 28-30) Ndị ghọtara ihe ọ pụtara, 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị ịchụ aja,' anaghị ama ndị ikpe na-amaghị ikpe na-arụ ọrụ n'ụbọchị izu ike ikpe. (Mt 12: 1-8) E mere mmadụ ụbọchị izu ike maka mmadụ, e meghị mmadụ maka ụbọchị izu ike. (Mak 2:27)
N'ime Kraist Jisus obibì-úgwù ma-ọbu ebìghi-úgwù adighi-aba kwa ihe ọ bula; ( Gal 5:6 ) Anyị na-emezu iwu Kraịst site n’ibu ibu dịịrị ibe anyị. (Gal 6:2) Anyị agaghị eji onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma e wezụga ịhụ ibe anyị n'anya, n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu. ( Ndị Rom 13:8 ) N’ihi na iwu ndị ahụ, “Akwala iko, egbula mmadụ, Ezula ohi, Achọla anyaukwu,” na iwu ọ bụla ọzọ, ka achịkọtara n’okwu a: “Ị ga-ahụ ihe gị n’anya n’anya. onye agbata obi dị ka onwe gị.” ( Rom 13:9 ) Ịhụnanya adịghị eme mmadụ ibe ya ihe ọjọọ; ya mere ịhụnanya bụ mmezu nke iwu. (Ndị Rom 13:10) Ọ bụrụ n’ezie imezu iwu eze dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, “Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị,” ị na-eme nke ọma. ( Jems 2:8 ) Nke a bụ ihe Chineke nyere n’iwu, ka anyị kwere n’aha Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst ma hụrịta ibe anyị n’anya, dị nnọọ ka o nyere anyị n’iwu. (1 Jọn 3:23)
(Matiu 5: 43-45) Hụ ndị iro gị n'anya ma kpee ekpere maka ndị na-akpagbu gị
43 "Ị nụla na a sịrị, 'Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị. ' 44 Ma asim unu, Hunu ndi -iro -unu n'anya, kpe -kwa -nu ekpere bayere ndi nutesob youu unu, 45 ka unu wee bụrụ ụmụ nke Nna unu nọ n'eluigwe. N'ihi na ọ na -eme ka anyanwụ ya na -awakwasị ndị ọjọọ na ndị ọma, na -emekwa ka mmiri zoo n'ahụ ndị ezi omume na ndị ajọ omume.
(Matiu 6:12) Dịka anyị gbaghakwaara ndị ji anyị ụgwọ
12 gbaghara anyị ụgwọ anyị ji, dika ayi onwe -ayi b haveagharawo -kwa -ra ndi ji ayi ugwọ.
(Matiu 7: 1-2) Ekpela ikpe, ka a ghara ikpe gị ikpe
1 "Ekpela ikpe, ka a ghara ikpe gị ikpe. 2 N'ihi na ikpe ị na -ekwu, a ga -eji kpee gị ikpe, ihe ị jikwa ya ka a ga -eji tụọ gị.
Matiu 7: 12-13 (NIV), nke a bụ iwu na ndị amụma
12 "Ya mere, ihe ọ bụla ị chọrọ ka ndị ọzọ mee gị, meekwa ha, n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma. 13 “Banye n'ọnụ ụzọ dị warara. N'ihi na ọnụ ụzọ ámá sara mbara, ụzọ dịkwa mfe nke na -eduba na mbibi, ndị na -esikwa na ya abanye dị ọtụtụ. 14 N'ihi na warara ka ọnụ ụzọ ahụ dị, ụzọ dịkwa warara nke na -eduba na ndụ, ndị na -achọta ya dịkwa ole na ole.
Matiu 9: 10-13 (ESV), ebere ka m na-achọ, ọ bụghị àjà
10 Ma mb Jesuse Jisus nọdusiri na nri n'ulo, le, ọtutu ndi -ọna -utu na ndi -nmehie biara we soro Jisus na ndi n disciplesso uzọ -Ya nọdu na nri. 11 Mgbe ndị Farisii hụrụ nke a, ha sịrị ndị na -eso ụzọ ya, “Gịnị mere onye ozizi gị ji eso ndị ọnaụtụ na ndị mmehie eri nri?” 12 Ma mgbe ọ nụrụ ya, ọ sịrị, “Ndị ahụike adịghị mkpa dibịa, kama ọ bụ ndị ọrịa. 13 Gaanụ mụta ihe nke a pụtara: 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị ịchụ aja. ' N'ihi na abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie. "
Matiu 11: 28-30 (Mb)yok dị mfe, ibu m dịkwa mfe
28 Biakutenum, unu nile ndi nādọb laboru onwe-ha n'ọlu, ndi ebowo-kwa-ra ibu di arọ́, Mu onwem g giveme kwa ka unu zuru ike. 29 Nyaranu yoke nkem n'olu -unu, muta -kwa -nu ihe n'ọnum: n'ihi na abum onye di nwayọ na onye di ume -ala n'obi; 30 N'ihi na yoke nke m adịghị egbu mgbu, ibu m dịkwa mfe. "
Matiu 12: 1-8 N'ihi na Nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike
1 N’oge ahụ, Jizọs gafere n’etiti ubi ọka n’ụbọchị izu ike. Agụụ gụkwara ndị na -eso ụzọ ya, ha wee malite ịghọrọ ụyọkọ ọka wit na -eri. 2 Ma mgbe ndị Farisii hụrụ ya, ha sịrị ya,Lee, ndị na -eso ụzọ gị na -eme ihe iwu na -akwadoghị ime n'ụbọchị izu ike. " 3 Ọ sịrị ha, “Ọ bụ na unu agụbeghị ihe Devid mere mgbe agụụ na -agụ ya, na ndị ya na ha nọ: 4 otu o siri banye n'ụlọ Chineke wee rie achịcha nke Presence, nke iwu na -akwadoghị ka o rie ma ọ bụ maka ndị ya na ha nọ, kama naanị maka ndị nchụàjà? 5 Ma -ọbu ùnu agughi n'Iwu ahu otú ndi -nchu -àjà n'ulo uku Chineke si eme ka ubọchi -izu -ike ghara idi nsọ n'ubọchi -izu -ike, ghara kwa ikpe ikpe? 6 Asim unu, na ihe kariri ulo uku Chineke nọ n'ebe a. 7 Ọ buru kwa na unu matara ihe okwu a bu, Anamachọ ebere, ọ bughi àjà, unu agaghi -amawori ndi ikpe nāmaghi. 8 N'ihi na Nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike. "
Matiu 15: 10-20 (ESV), ọ bụghị ihe na-abanye n'ọnụ na-emerụ mmadụ
10 O we kpọ ndi -Ju biakute Ya, si ha, Nurunu, ghọta kwa: 11 ọ bụghị ihe na -aba n'ọnụ na -emerụ mmadụ, kama ọ bụ ihe na -esi n'ọnụ apụta; nke a na -emerụ mmadụ. " 12 Mgbe ahụ ndị na -eso ụzọ ya bịakwutere ya sị ya, “Ị mara na o wutere ndị Farisii mgbe ha nụrụ okwu a?” 13 Ọ zara, “Osisi ọ bụla Nna m nke eluigwe na -akụghị ka a ga -efopụ. 14 Hapụnụ ha; ha bu ndi -ndú kpuru ìsì. Ọ bụrụkwa na onye ìsì edu onye ìsì, ha abụọ ga -adaba n'olulu. " 15 Ma Pita sịrị ya, “Kọwaara anyị ilu a.” 16 O we si, Ọ̀ bu kwa unu onwe -unu n withoutnweghi nghọta? 17 Ị hụghị na ihe ọ bụla nke na -abanye n'ọnụ na -abanye n'ime afọ wee chụpụ ya? 18 Ma ihe na -esi n'ọnụ apụta na -esite n'obi, nke a na -emerụkwa mmadụ. 19 N'ihi na n'obi ka ajọ echiche si apụta, igbu ọchụ, ịkwa iko, ịkwa iko, izu ohi, onye akaebe ụgha, nkwutọ. 20 Ihe ndị a na -emerụ mmadụ. Ma iji aka a na -akwọghị akwọ rie nri adịghị emerụ onye ọ bụla. ”
Matiu 16: 6-12 Kpachara anya maka ihe iko achịcha nke ndị Farisii na ndị Sadusii
6 Jizọs sịrị ha, “Lezienụ anya ma lezie anya maka ihe iko achịcha nke ndị Farisii na ndị Sadusii. " 7 Ha we malite iturita n'etiti onwe -ha, si, Ayi ejighi ob breade achicha. 8 Ma ebe Jisọs matara nke a, ọ sịrị, “Unu ndị okwukwe nta, gịnị mere unu na -arụrịta ụka n'etiti onwe unu na unu enweghị achịcha? 9 Ị ghọtabeghị? Donu echetaghi achicha ise nke nnù ndikom ise na ọgu iri, na nkata ole unu chikọtara? 10 Ma ọ bụ, ogbe achịcha asaa maka puku anọ, na nkata ole ị chịkọtara? 11 Is si a thata ghara ịghọta na ekwughị m banyere achịcha? Kpachara anya maka ihe iko achịcha nke ndị Farisii na ndị Sadusii. " 12 Mgbe ahụ ha ghọtara na ọ sịghị ha ka ha kpachara anya maka ihe iko achịcha, kama maka nkuzi ndị Farisii na ndị Sadusii.
Matiu 22: 34-40 N'elu iwu -nsọ abụọ a ka iwu nile na ndị amụma nile dabere
34 Ma mgbe ndị Farisii nụrụ na o mechiri ọnụ ndị Sadusii, ha gbakọrọ. 35 Na otu onye n'ime ha, onye ọka iwu, jụrụ ya ajụjụ iji nwalee ya. 36 “Onye Ozizi, olee nke bụ nnukwu ihe e nyere n'iwu n'ime iwu ahụ?” 37 O wee sị ya, "Ị ga -ahụ Jehova bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum na mkpụrụ obi gị niile na uche gị niile. 38 Nke a bụ ihe ukwu na ihe mbụ enyere n'iwu. 39 Ihe nke abụọ dị ka ya bụ: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. 40 N'elu iwu -nsọ abụọ a ka iwu nile na ndị amụma nile dabere. "
Matiu 23: 1-4 Ha na -ekekọta ibu dị arọ, ma tụkwasị ha n'ubu ndị mmadụ
1 Mgbe ahụ, Jizọs gwara igwe mmadụ ahụ na ndị na -eso ụzọ ya, 2 “Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii nọdụrụ ala n'oche Mozis, 3 ya mere mee ma debe ihe ọ bụla ha gwara gị, mana ọ bụghị ọrụ ha na -eme. N'ihi na ha na -ekwusa, ma ha anaghị eme ya. 4 Ha na -ekekọta ibu dị arọ, nke siri ike ịnagide, tụnye ha n'ubu ndị mmadụ, mana ha onwe ha achọghị iji mkpịsị aka ha megharịa ha..
Matiu 23: 27-28 (ESV), ị na-apụta dị ka onye ezi omume, mana n'ime gị juputara na ihu abụọ
27 Ahụhụ ga -adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! N'ihi na unu dị ka ili e tere nzụ, nke pụtara n'ile anya mara mma, mana n'ime ya jupụtara ọkpụkpụ ndị nwụrụ anwụ na adịghị ọcha niile. 28 Ya mere unu onwe unu na -ahụkwa onwe unu dị ka ndị ezi omume, ma n'ime unu jupụtara na ihu abụọ na mmebi iwu.
(Mak 2: 23-28) E mere mmadụ izu ike maka mmadụ, emeghị mmadụ maka ụbọchị izu ike
23 Otu ụbọchị izu ike, ọ na -agafe n'ọka ọka, ka ha na -aga, ndị na -eso ụzọ ya malitere ịhọtụ ọka. 24 Ndi -Farisi we si Ya, Le, gini mere ha n doingme ihe n lawzighi ezi n'iwu n'ubọchi -izu -ike? 25 O we si ha, Havenu agughi ihe Devid mere, mb hee ọ nọ na nkpà, mb wase agu nāgu kwa ya, ya na ndi ya na ha nọ: 26 kedu ka o si bata n’ụlọ Chineke, n’oge Abaiata nnukwu onye nchụàjà, wee rie achịcha nke ọnụnọ, nke iwu akwadoghị ka onye ọ bụla rie ma e wezụga ndị nchụàjà, nyekwa ndị ya na ha nọ? ” 27 O we si ha, Emere ubọchi -izu -ike n'ihi madu, emeghi madu n'ihi ubọchi -izu -ike. 28 Ya mere Nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike. ”
(Mak 7: 15-23) N'ihi ya, o kwupụtara na ihe oriri niile dị ọcha.
15 Ọ dịghị ihe dị na mpụga mmadụ nke site na ịbanye n'ime ya nwere ike merụọ ya, ma ihe na -esi n'ime mmadụ apụta na -emerụ ya. " 17 Ma mgbe ọ banyere n'ime ụlọ ma hapụ ndị mmadụ, ndị na -eso ụzọ ya jụrụ ya gbasara ilu ahụ. 18 O we si ha, Thennu onwe -unu kwa, ùnu enweghi nghọta? Ị hụghị na ihe ọ bụla si n'ime mmadụ bata n'ime mmadụ enweghị ike imerụ ya, 19 ebe ọ bụ na ọ banyeghị n'obi ya mana afọ ya, wee chụpụ ya? " (N'ihi ya, o kwupụtara na ihe oriri niile dị ọcha.) 20 Ọ sịkwara, “Ihe si n'ime mmadụ pụta bụ ihe na -emerụ ya. 21 N'ihi na n'ime, n'obi mmadụ, ka echiche ọjọọ si apụta, ịkwa iko, izu ohi, igbu ọchụ, ịkwa iko, 22 anyaukwu, ajọ omume, aghụghọ, agụụ mmekọahụ, anyaụfụ, nkwutọ, mpako, nzuzu. 23 Ihe ọjọọ ndị a niile na -esi n’ime apụta, na -emerụ mmadụ. ”
(Luk 6: 35-36) Nwee obi -ebere, dịka Nna -unu nwere obi ebere
ma hụ ndị iro gị n'anya, meekwa ihe ọma, gbazinye, n'atụghị anya ihe ọ bụla, ụgwọ ọrụ gị ga -adịkwa ukwuu, na unu ga -abụ ụmụ nke Onye Kasị Elu, n'ihi na ọ na -emere ndị na -enweghị ekele na ndị ọjọọ ihe. Nwee obi -ebere, dịka Nna -unu nwere obi ebere.
Luk 11: 4 (ESV), anyị onwe anyị na -agbaghara onye ọ bụla ji anyị ụgwọ
4 gbaghara anyị mmehie anyị,
n'ihi na ayi onwe-ayi nāb forgiveaghara onye ọ bula nke ji ayi ugwọ.
Luk 12: 1-3 (NIV), Kpachara anya maka ihe iko achịcha nke ndị Farisii, nke bụ ihu abụọ
1 Ka ọ dị ugbu a, mgbe ọtụtụ puku mmadụ gbakọtara nke na ha na -azọ ibe ha ụkwụ, ọ malitere ibu ụzọ gwa ndị na -eso ụzọ ya, “Kpachara anya maka ihe iko achịcha nke ndị Farisii, nke bụ ihu abụọ. 2 Ọ dịghị ihe ọ bụla e kpuchiri ekpuchi nke a na -agaghị ekpughe, ma ọ bụ ihe zoro ezo nke a na -agaghị ama. 3 Ya mere ihe ọ bụla unu kwuru n'ọchịchịrị, a ga -anụ ya n'ìhè, ihe unu kwukwara n'ime ụlọ, a ga -ekwusa ya n'elu ụlọ..
(John 13: 34-35), Iwu ọhụrụ ka m na-enye gị
34 Iwu ọhụrụ ka m na -enye unu, ka unu na -ahụrịta ibe unu n'anya: dịka m siri hụ unu n'anya, ka unu na -ahụrịtakwa ibe unu n'anya. 35 Mmadụ niile ga -eji nke a mara na unu bụ ndị na -eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya maka ibe unu."
(Jọn 15: 9-12) Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n’iwu, unu ga-anọgide n’ịhụnanya m
9 Dị ka Nna m hụworo n'anya, otu ahụ ka m hụkwara gị n'anya. Nọgide n'ịhụnanya m. 10 Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n'iwu, unu ga -anọgide n'ịhụnanya m, dịka m debere iwu Nna m wee nọrọ n'ịhụnanya ya.. 11 Ihe ndia ka M'gwaworo unu, ka ọ myùm we di nime unu, ka ọ yourù-unu we zu kwa. 12 “Nke a bụ ihe m nyere n'iwu, ka unu na -ahụrịta ibe unu n'anya dị ka m siri hụ unu n'anya.
Ndị Galetia 5: 6 (NIV) Naanị okwukwe na -arụ ọrụ site n'ịhụnanya
6 N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs ọ bụghị ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù abụghị ihe ọ bụla, kama ọ bụ naanị okwukwe na -arụ ọrụ site n'ịhụnanya.
(Ndị Galetia 6: 2) Na -eburịtanụ ibe unu ibu arọ, wee mezuo iwu nke Kraịst
2 Burunụ ibe unu ibu arọ, wee mezuo iwu nke Kraịst.
Ndị Rom 13: 8-10 Onye huru ibe ya n'anya emezula iwu
8 Unu ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma e wezụga ịhụ ibe unu n'anya, n'ihi na onye hụrụ onye ọzọ n'anya emezuwo iwu. 9 Maka iwu, "Akwala iko, egbula ọchụ, ezula ohi, enwela anyaukwu," na iwu ọ bụla ọzọ, achịkọtara n'okwu a: "Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. " 10 Ịhụnanya adịghị eme onye agbata obi ihe ọjọọ; ya mere ịhụnanya bụ imezu iwu.
(Jemes 2: 8) Ọ bụrụ n'ezie na ị na -emezu iwu eze, ị na -eme nke ọma
8 Ọ bụrụ n'ezie na ị na -emezu iwu eze dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo, "Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị," ị na -eme nke ọma.
1 Jọn 3: 22-24. Nke a bụ ihe o nyere n'iwu, ka anyị kwere n'aha Ọkpara ya wee hụ ibe anyị n'anya
22 na ihe ọ bụla anyị rịọrọ ka anyị na -enweta n'aka ya, n'ihi na anyị na -edebe iwu ya ma na -eme ihe na -atọ ya ụtọ. 23 na nke a bụ ihe o nyere n'iwu, ka anyị kwere n'aha Ọkpara ya Jizọs Kraịst wee hụrịta ibe anyị n'anya, dịka o nyere anyị n'iwu.. 24 Onye ọ bụla nke na -edebe ihe o nyere n'iwu na -anọgide n'ime Chineke, Chineke na -anọgidekwa n'ime ya. Ọ bu kwa nka ka ayi ji mara na Ọ nānọgide nime ayi, site na Mọ Nsọ nke O nyeworo ayi.
Jizọs gwara ndị Farisii, “Ọ bụrụ na unu maara ihe nke a pụtara, 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị ịchụ aja,' ị garaghị ama ndị ikpe na -amaghị ikpe." (Mat 12: 7, Hos 6: 6-7, Maị 6: 8) Nke a bụ nzaghachi nye ndị na-eso ụzọ ya na-emebi ụbọchị izu ike. (Matiu 12: 1-2) N'ime ime nke a, ọ na-ekwu na mmụọ nke iwu dị mkpa karịa akwụkwọ iwu. (Mat. 12: 3-7) N'ezie, akwụkwọ ozi ahụ emetụtaghịdị ndị nchụàjà Chineke. (Matiu 12: 3-5) Anyị makwaara na ndị na-eso Jizọs bụ ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya. (Mkpu 1: 6, Nkpughe 5:10, Nkpughe 20: 6) Izu oke anyị sitere na Chineke, onye mere ka anyị zuo oke ịbụ ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị nke akwụkwọ ozi kama nke mmụọ. N'ihi na akwụkwọ ozi na -egbu, ma Mmụọ na -enye ndụ. (2 Ndị Kọrịnt 3: 5-6) Onye Juu bụ n'ime, ibi úgwù bụkwa ihe sitere n'obi, site na mmụọ, ọ bụghị site n'akwụkwọ ozi. (Ndị Rom 2:29) Ọ bụrụ na mmụọ nsọ na -edu gị, ị nọghị n'okpuru iwu. (Gal 5:18) Ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke. (Ndị Rom 8:14)
Ma tutu okwukwe abịa, a doro ayi n'agha. (Gal 3:23) Ya mere, iwu ahụ bụ onye na-elekọta anyị ruo mgbe Kraịst bịara, ka e site n’okwukwe gu anyị na ndị ezi omume. (Gal 3:24) Ma ugbu a okwukwe abịala, anyị anọghịkwa n’okpuru onye nlekọta, n’ihi na n’ime Kraịst Jizọs, unu niile bụ ụmụ Chineke site n’okwukwe. (Gal 3:25-26) Ịchọta na Kraịst abụghị inwe ezi omume nke anyị onwe anyị nke sitere n’iwu, kama nke ahụ sitere n’okwukwe na Kraịst, ezi omume sitere na Chineke nke dabeere n’okwukwe. (Ndị Filipaị 3:8-9) Ugbu a a tọhapụrụ anyị n’iwu, ka anyị wee na-eje ozi n’ụzọ ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ, ọ bụghịkwa n’ụzọ ochie nke akwụkwọ nsọ (Ndị Rom 7:6). N'ihi na Kraist bu nsọtu iwu ka onye ọ bula nke kwere ezi omume. (Ndị Rom 10: 4) Ma ezi omume nke dabeere n'okwukwe na-ekwu, "Okwu ahụ dị gị nso, n'ọnụ gị na n'ime obi gị." (Ndị Rom 10:6-8) Jehova na-ekwu, sị: “M ga-etinye iwu m n’uche ha, deekwa ha n’obi ha.” (Ndị Hibru 8:10)
Matiu 12: 1-8, Ọ bụrụ na ị maara-'Achọrọ m ebere, ọ bụghị ịchụ aja'-ị garaghị ama ya ikpe.
1 N’oge ahụ, Jizọs gafere n’etiti ubi ọka n’ụbọchị izu ike. Agụụ gụkwara ndị na -eso ụzọ ya, ha wee malite ịghọrọ ụyọkọ ọka wit na -eri. 2 Ma mgbe ndị Farisii hụrụ ya, ha sịrị ya, “Lee, ndị na -eso ụzọ gị na -eme ihe iwu na -akwadoghị ime n'ụbọchị izu ike.. " 3 Ọ sịrị ha, “Ọ bụ na unu agụbeghị ihe Devid mere mgbe agụụ na -agụ ya, na ndị ya na ha nọ: 4 otu o siri banye n'ụlọ Chineke wee rie achịcha nke ọnụnọ, nke iwu na -akwadoghị ka o rie ma ọ bụ maka ndị ya na ha nọ, kama ọ bụ naanị ndị nchụàjà? 5 Ma ọ bụ na ị gụbeghị n'Iwu ahụ ka n'Ụbọchị Izu Ike, ndị nchụàjà nọ n'ụlọ nsọ na -emerụ ụbọchị izu ike ma bụrụ ndị ikpe na -amaghị? 6 Asim unu, na ihe kariri ulo uku Chineke nọ n'ebe a. 7 na ọ bụrụ na ị maara ihe nke a pụtara, 'Ana m achọ ebere, ọ bụghị àjà, 'ị garaghị ama ndị ikpe na -amaghị ikpe. 8 N'ihi na Nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike. ”
Hosia 6: 6-7 IGBOB-Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà, ihe ọmụma Chineke karịa àjà nsure ọkụ.
6 n'ihi na Achọrọ m ebere, ọ bụghị ịchụ àjà, ihe ọmụma Chineke karịa àjà nsure ọkụ. 7 Mana dịka Adam ha mebiere ọgbụgba -ndụ ahụ; N'ebe ahụ ka ha mesoro m omume enweghị okwukwe.
Maịka 6: 8 (GỊNỊ ka Jehova na -achọ n’aka gị) ma ọ́ bụghị ime ihe n’ikpe ziri ezi na ịhụ obiọma n’anya?
8 O mmadụ, ọ gwawo gị ihe dị mma; gini kwa ka Jehova nāchọ n'aka -gi ma -ọbughi ime ezi omume, na ihu ebere n'anya, na iji obi -ume -ala soro Chineke -gi n walkjeghari?
2 Ndị Kọrịnt 3: 3-6. ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị n'akwụkwọ ozi kama ọ bụ nke Mmụọ
3 Ị na -egosikwa na ị bụ akwụkwọ ozi si n'aka Kraịst nyefere anyị, edeghị ya na ink kama ejiri mmụọ nke Chineke dị ndụ dee ya, ọ bụghị na mbadamba nkume kama edere ya n'obi mmadụ. 4 Nke a bụ obi ike anyị nwere site na Kraịst n'ebe Chineke nọ. 5 Ọ bụghị na anyị zuru oke n'ime onwe anyị ikwu ihe ọ bụla si n'aka anyị, mana afọ ojuju anyị sitere na Chineke, 6 Onye mere ka anyị zuo oke ịbụ ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị n'akwụkwọ ozi mana nke Mmụọ. N'ihi na akwụkwọ ozi na -egbu, ma Mmụọ na -enye ndụ.
Ndị Rom 2:29 (NIV) Onye Juu bụ n'ime, ibi úgwù bụkwa ihe dị n'obi, ọ bụghị site n'akwụkwọ ozi
ma Onye Juu bụ n'ime, ibi úgwù bụkwa ihe sitere n'obi, site na mmụọ, ọ bụghị site n'akwụkwọ ozi. Otuto ya esiteghị na mmadụ mana o sitere na Chineke.
Ndị Galetia 5: 18 (NIV) Ọ bụrụ na mmụọ nsọ na -edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu.
ma ọ bụrụ na Mmụọ Nsọ na -edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu.
Ndị Rom 8:14 (NIV) Ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke
14 N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke.
(Ndị Galetia 3: 23-26) Iwu bụ onye nche anyị ruo mgbe Kraịst bịara
23 Ma tupu okwukwe abịarute, anyị bụ ndị a dọtara n'agha n'okpuru iwu, nọkwa n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe a ga -ekpughe okwukwe na -abịanụ. 24 Yabụ, iwu bu onye -nche -ayi rue mb Christe Kraist biara, ka ewe site n'okwukwe gu ayi na ndi ezi omume. 25 Mana ugbu a okwukwe abịala, anyị anọkwaghị n'okpuru onye nlekọta, 26 n'ihi na nime Kraist Jisus unu nile bu umu Chineke, site n'okwukwe.
Ndị Filipaị 3: 8-9 (ESV), na-enweghị ezi omume nke sitere n'iwu, kama site na okwukwe na Kraịst
8 N'ezie, Ana m agụ ihe niile dị ka ihe na -abaghị uru n'ihi uru dị oke mkpa nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m. N'ihi ya, ahụrụ m ihe niile funahụrụ m wee gụọ ha ka ihe mkpofu, ka m wee nweta Kraịst 9 ewe chọta ya nime ya, enweghị m ezi omume nke m nke sitere n'iwu, mana nke sitere na okwukwe na Kraịst, ezi omume nke sitere na Chineke nke dabere n'okwukwe
(Ndị Rom 7: 6) Ugbu a, a tọhapụrụ anyị n'iwu. ka anyị wee na -eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ
6 ma ugbua a tọhapụrụ anyị n'iwu, ebe ọ nwụrụ nye ihe dọọrọ anyị n'agha, ka anyị wee na -eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ, ọ bụghị n'ụzọ ochie nke koodu ederede
Ndị Rom 10: 4-8 Kraịst bụ njedebe iwu maka ezi omume nye onye ọ bụla kwere
4 n'ihi na Kraịst bụ njedebe iwu maka ezi omume nye onye ọ bụla kwere. 5 N'ihi na Moses n writesde ihe bayere ezi omume nke di n'iwu, na onye n doesme ihe enyere n'iwu g bysite na ya di ndu. 6 Ma ezi omume nke dabeere n'okwukwe na -ekwu, “Asịla n'obi gị, 'Onye ga -arịgo n'eluigwe?'” (Ya bụ, iweda Kraịst ala) 7 “Ma ọ bụ 'Whonye ga -agbada n'ime abis?'” (Ya bụ, ịkpọlite ​​Kraịst n'ọnwụ). 8 Ma gịnị ka ọ na -ekwu? “Okwu ahụ dị gị nso, n'ọnụ gị na n'obi gị”(Ya bụ, okwu okwukwe anyị na -akpọsa);
Ndị Hibru 8: 10 (NIV) M ga -etinye iwu m n'obi ha, deekwa ya n'obi has
N'ihi na nke a bụ ọgbụgba ndụ nke mụ na ụlọ Izrel ga -agba mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, ka Onye -nwe -anyị kwuru: M ga -etinye iwu m n'obi ha, deekwa ya n'obi has,
Iwu na ndi -amuma di rue oge Jọn; kemgbe ahụ a na -ekwusa ozi ọma alaeze Chineke, onye ọ bụla na -amanye ịbanye na ya. (Luk 16:16) Jizọs nyere ahụ ya maka anyị yana ọbara ya nke a wụpụụrụ anyị bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara ya. (Luk 22: 19-20) E si n'aka Mozis nye iwu ahụ; amara na ezi -okwu sitere n'aka Jisus Kraịst bịa. (Jọn 1:17) Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ka ọ kpee ụwa ikpe, kama ka e wee zọpụta ụwa site na ya. ya. (Jọn 3:17) WhoevA gaghị ekpe onye ọ bụla kwere na ya ikpe, n'ihi na o kweghị n'aha nke Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya. (Jọn 3:18) Jizọs sịrị,Ọ bụrụ na onye ọ bụla anụ okwu m ma ghara idebe ya, m gaghị ekpe ya ikpe; n’ihi na abịaghị m ikpe ụwa ikpe, kama ọ bụ ka m zọpụta ụwa.” ( Jọn 12:47 ) “Onye na-ajụ m ma na-anabataghị okwu m nwere onyeikpe; okwu nke M’kwuworo ga-ekpe ya ikpe n’ụbọchị ikpeazụ.” (Jọn 12:48) Nye ndị na-ajụ Kraịst, ọ bụ okwu ya ga-ekpe ha ikpe—iwu ndị Nna ahụ nyere Jizọs; ihe e nyere ya ka o kwuo na ihe ọ ga-ekwu. (Jọn 12:49) Jizọs kwuru kpọmkwem dị ka Nna ahụ gwara ya—iwu ya bụ ndụ ebighị ebi. ( Jọn 12:50 ) N’ikwu nke a, Jizọs mere ka o doo anya na ọ bụghị site n’Iwu Mozis ka a ga-eji kpee anyị ikpe, kama ọ ga-abụ dị ka ụkpụrụ ọhụrụ si dị: okwu ahụ o gwara ya site n’aka Nna ya. (Jọn 12:47-50)
Ndị niile mehiere n’enweghị iwu ga-alakwa n’iyi n’enweghị iwu, ma ndị niile mehiere n’okpuru iwu ka a ga-eji iwu kpee ha ikpe. (Ndị Rom 2:12) Mgbe ndị mba ọzọ, bụ́ ndị na-enweghị iwu, site n’okike na-eme ihe iwu ahụ chọrọ, ha bụ iwu nye onwe ha ma na-egosi na e dewo ọrụ nke iwu n’obi ha. (Ndị Rom 2:14-15) Ma onye Juu bụ otu n’ime obi, ibi úgwù bụkwa ihe sitere n’obi, site na Mmụọ Nsọ, ọ bụghị site n’akwụkwọ ozi. (Ndị Rom 2:29) Ugbu a ezi omume nke Chineke ekpughere ugbu a ma e wezụga iwu - ezi omume nke Chineke site n'okwukwe na Jizọs Kraịst maka ndị niile kwere - n'ihi na ọ dịghị ọdịiche dị n'etiti ndị Juu na ndị Jentaịl. (Ndị Rom 3: 21-22) A na-agụ anyị na ndị ezi omume site na mgbapụta ahụ dị n'ime Kraịst Jizọs, onye Chineke debere ka ọ bụrụ ihe udo site n'ọbara ya ka e wee nata site n'okwukwe. (Ndị Rom 3: 24-25) Ọ bụghị site n'iwu nke ọrụ kama site n'iwu nke okwukwe - a na-agụ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe ma e wezụga ọrụ nke iwu. (Ndị Rom 3:27-28) Kraịst bụ njedebe nke iwu maka ezi omume nye onye ọ bụla nke kwere. (Rom 10:4) Nke a dị iche n’ebe Mosis nọ bụ́ onye dere banyere ezi omume nke dabeere n’iwu, na onye na-eme ihe e nyere n’iwu ga-esi na ya dị ndụ. (Rom 10:5) Ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru Iwu nke Kraịst, ị nọghị n'okpuru iwu (nke a napụrụ n'iwu Mozis) (1Kọ 9:19-21)
Anyị bụ akwụkwọ ozi sitere n’aka Kraịst, nke e ያልተ ijighị ink site ri D Diri Mọ nke Chineke di ndu, ọ bughi n’elu mbadamba nkume, kama n’elu mbadamba nkume nile nke obi madu. (2 Ndị Kọrịnt 3:3). Izu-ozu-ayi sitere na Chineke, Onye mere ka ayi zuworo ibu ndi-orù nke ọb͕ub͕a-ndu ọhu, ọ bughi nke akwukwọ, kama nke Mọ Nsọ: n'ihi na akwukwọ ahu nēb͕u, ma Mọ Nsọ nēnye ndu. (2Kọ 3:5-6) Anyị bụbu ndị ọbịa n'ọgbụgba ndụ nke nkwa, na-enweghị olileanya na enweghị Chineke n'ụwa. (Efe 2:12) Ma ugbu a n’ime Kraịst Jizọs, e mewo ka unu ndị nọbu n’ebe dị anya bịa nso site n’ọbara Kraịst. ( Efe 2:13 ) N’ihi na ya onwe ya bụ udo anyị, onye kwaturu n’anụ ahụ ya mgbidi nkewa nke ibu iro site n’iwepụ iwu nke iwu e dere n’ime emume. ( Efe 2:14-15 ) Kraịst enwetawo ozi nke dị nnọọ mma karịa nke ochie ebe ọgbụgba ndụ ọ na-agbado dị mma. (Hib 8:6) A sị na ọgbụgba ndụ mbụ ahụ enweghị ntụpọ, agaraghị enwe ohere ịchọ nke abụọ. (Hib 8:7) N’ikwu okwu banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ na-eme ka onye nke mbụ gharazie ịbụ ihe na-agaghị emezi emezi—ihe na-akazi agazi na-aka nká ma dị njikere ịla n’iyi. (Ndị Hibru 8:13)
(Luk 16: 14-16) Iwu na ndi -amuma di rue oge Jọn
14 Ndị Farisii, ndị hụrụ ego n'anya, nụrụ ihe ndị a niile, ha wee jiri ya mee ihe ọchị. 15 O we si ha, Unu onwe -unu bu ndi nāgu onwe -unu na ndi ezi omume n'anya madu: ma Chineke mara obi -unu. N'ihi na ihe dị elu n'etiti mmadụ bụ ihe arụ n'anya Chineke. 16 "Iwu na ndi -amuma di rue oge Jọn; kemgbe ahụ a na -ekwusa ozi ọma alaeze Chineke, onye ọ bụla na -amanye ịbanye na ya.
(Luk 22: 19-20) Iko a wụpụụrụ unu bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m
19 O we nara ob breade achicha, kele kwa, we nyawa ya, nye ha, si, Nka bu arum nke enyereri unu. Na -emenụ nke a ka unu wee na -echeta m. ” 20 Na kwa iko ahụ mgbe ha risịrị nri, na -asị, “Iko a wụpụụrụ unu bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m.
Jọn 1:17, Amara na ezi -okwu sitere na Jisus Kraịst bịa
17 N'ihi na esitere n'aka Moses nye iwu Chineke; amara na ezi -okwu sitere n'aka Jisus Kraịst bịa.
(Jọn 3: 17-19) A gaghị ama onye ọ bụla kwere na ya ikpe (ekpe ikpe)
17 n'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ka ọ maa ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. 18 A gaghị ama onye ọ bụla nke kwere na ya ikpe;. 19
(Jọn 12: 47-50) Okwu m kwuru ga -ekpe ya ikpe n'ụbọchị ikpeazụ
47 Iọ bụrụ na onye ọ bụla anụ okwu m ma ọ naghị edebe ya, anaghị m ekpe ya ikpe; n'ihi na abịaghị m ka m kpee ụwa ikpe kama ka m zọpụta ụwa. 48 Nke onye jụrụ m ma ghara ịnabata okwu m nwere onye ikpe; okwu m kwuru ga -ekpe ya ikpe n'ụbọchị ikpe -azụ. 49 N'ihi na ekwughi m okwu n'onwe m, ma Nna nke zitere m enyewo m iwu — ihe m ga -ekwu na ihe m ga -ekwu. 50 Amakwaara m na ihe o nyere n'iwu bụ ndụ ebighi ebi. Ya mere, ihe m na -ekwu, m na -ekwu dị ka Nna gwara m. "
Ndị Rom 2: 12-16 Ndị mba ọzọ - ha bụ iwu nye onwe ha
12 n'ihi na ndị niile mehiere na -enweghị iwu ga -alakwa n'iyi n'iwu, ndị niile mehiere n'okpuru iwu ga -ekpe ikpe site n'iwu. 13 N'ihi na ọ bụghị ndị na -anụ iwu bụ ndị ezi omume n'ihu Chineke, kama ndị na -eme iwu ga -abụ ndị ezi omume. 14 N'ihi na mgbe ndị mba ọzọ, ndị na -enweghị iwu, sitere n'ọmụmụ na -eme ihe iwu chọrọ, ha bụ iwu nye onwe ha, n'agbanyeghị na ha enweghị iwu.. 15 Ha na -egosi na edere ọrụ iwu ahụ n'obi ha, ebe akọ na uche ha na -agbakwa ama, echiche ha na -emegiderịta na -ebo ha ebubo ma ọ bụ ọbụna gbaghara ha 16 n'ụbọchị ahụ mgbe, dịka oziọma m si dị, Chineke ga -ekpe ikpe nzuzo nke mmadụ site na Kraịst Jizọs.
Ndị Rom 2:29 (NIV) Ibi úgwù bụ ihe sitere n'obi, site na mmụọ, ọ bụghị site n'akwụkwọ ozi
29 ma Onye Juu bụ n'ime, ibi úgwù bụkwa ihe sitere n'obi, site na mmụọ, ọ bụghị site n'akwụkwọ ozi. Otuto ya esiteghị na mmadụ mana o sitere na Chineke.
Ndị Rom 3: 21-28 (NIV), Tezi omume Chineke apụtawo ìhè ewezuga iwu
21 ma ugbua emewo ka ezi omume Chineke puta ihe n'enweghi iwu, ọ bụ ezie na Iwu na Ndị Amụma na -agba àmà banyere ya— 22 ezi omume Chineke site na okwukwe na Jizọs Kraịst maka ndị niile kwere. N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche: 23 n'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. 24 emekwara ka ha bụrụ ndị ezi omume site na amara ya dị ka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs, 25 onye Chineke wepụtara n'ihu ya ka ọ bụrụ ihe ịjụrụ ya obi site n'ọbara ya, ka okwukwe ya wee nata ya. Nke a bụ iji gosi ezi omume Chineke, n'ihi na n'ime ntachi obi ya dị nsọ ọ gafere mmehie mbụ. 26 Ọ bụ igosi ezi omume ya ugbu a, ka o wee bụrụ onye ezi omume na onye ziri ezi nke onye nwere okwukwe na Jizọs. 27 Mgbe ahụ, gịnị ga -eme nke ịnya isi anyị? Ọ na -ekwe. Olee ụdị iwu? Site n'iwu nke ọrụ? Ee e, kama site n'iwu nke okwukwe. 28 N'ihi na anyị na -ewere na a na -akpọ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe ma ọ bụghị n'ọrụ iwu.
Ndị Rom 10: 4-5 Kraịst bụ njedebe iwu maka ezi omume nye onye ọ bụla kwere
4 n'ihi na Kraịst bụ njedebe iwu maka ezi omume nye onye ọ bụla kwere. 5 n'ihi na Mozis na -ede maka ezi omume nke dabere n'iwu, na onye na -eme ihe enyere n'iwu ga -adị ndụ site na ha
1 Ndị Kọrịnt 9: 19-21 (ESV), anọghị m n'okpuru iwu
19 N'ihi na ọ bụ ezie na enwere m onwe m n'ebe mmadụ niile nọ, emeela m onwe m onye na -ejere mmadụ niile ozi, ka m wee rite ọtụtụ n'ime ha n'uru. 20 N'ebe ndị Juu nọ, adịrị m ka onye Juu, ka m wee rite ndị Juu n'uru. N'ebe ndị nọ n'okpuru iwu, adịrị m ka onye nọ n'okpuru iwu (n'agbanyeghị na anọghị m n'okpuru iwu) ka m wee merie ndị nọ n'okpuru iwu. 21 Nye ndị na -abụghị iwu Aghọrọ m onye dị ka onye na -anọghị n'okpuru iwu (anọghị m n'iwu nke Chineke kama n'okpuru iwu Kraịst) ka m wee nweta ndị na -anọghị n'iwu.
2 Ndị Kọrịnt 3: 2-6 (ESV), ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị nke akwụkwọ ozi kama nke mmụọ
2 Unu onwe unu bụ akwụkwọ ozi nkwusa anyị, nke e dere n'obi anyị, ka mmadụ niile mara ma gụọ ya. 3 Ị na -egosikwa na ị bụ akwụkwọ ozi si n'aka Kraịst nyefere anyị, edeghị ya na ink kama ejiri mmụọ nke Chineke dị ndụ dee ya, ọ bụghị na mbadamba nkume kama edere ya n'obi mmadụ. 4 Nke a bụ obi ike anyị nwere site na Kraịst n'ebe Chineke nọ. 5 Ọ bụghị na anyị zuru oke n'ime onwe anyị ikwu ihe ọ bụla si n'aka anyị, mana izuzu anyị sitere na Chineke, 6 Onye mere ka anyị zuo oke ịbụ ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị n'akwụkwọ ozi mana nke Mmụọ. N'ihi na akwụkwọ ozi na -egbu, ma Mmụọ na -enye ndụ.
(Ndị Efesọs 2: 12-16) Na -ewepụ iwu nke iwu -nsọ egosipụtara na emume -nsọ nile
12 cheta na e kewapụrụ gị n'oge ahụ na Kraịst, kewapụrụ onwe ya na ọchụnta ego nke Israel na ndị bịara abịa n'ọgbụgba ndụ nke nkwa, enweghị olileanya na enweghị Chineke n'ụwa. 13 Ma ugbu a n'ime Kraịst Jizọs unu ndị nọbu n'ebe dị anya ka ọbara nke Kraịst bịaruo unu nso. 14 N'ihi na ya onwe ya bụ udo anyị, onye mere anyị abụọ otu ma kwatuo anụ ahụ ya na mgbidi nkewa iro 15 site na kagbuo iwu nke iwu -nsọ egosipụtara na emume -nsọ, ka o wee mepụta n'ime onwe ya otu nwoke ọhụrụ n'ọnọdụ abụọ ahụ, na -eme udo, 16 na ike mee ka anyị na Chineke dị n'otu site n'otu obe site na obe, si otú a na -egbu iro.
(Ndị Hibru 8: 6-7) Ọgbụgba ndụ nke ọ na -eme ka ọ dị mma, ebe ọ bụ na etinyere ya na nkwa ndị ka mma
6 Mana dịka ọ dị ugbu a, Kraịst enwetala ozi nke dị oke mma karịa nke ochie dịka ọgbụgba ndụ ọ na -eme ka ọ dị mma, ebe ọ bụ na etinyere ya na nkwa ndị ka mma.. 7 N'ihi na asi na ọb covenantub covenanta -ndu mbu ahu bu ihe n faultnweghi ntupọ, agaghi -enwe kwa oge ichere nke -abua.
(Ndị Hibru 8: 12-13) N'ikwu banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ na -eme ka nke mbụ bụrụ ihe mgbe ochie
13 N'ikwu banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ na -eme ka nke mbụ bụrụ ihe mgbe ochie. Na ihe na -akawanye nká ma na -aka nka dị njikere ịpụ n'anya.
Ihe na-emegidekarị ndị na-agbaso iwu Mozis bụ na ịgbasoghị iwu e dere ede bụ mmebi iwu. Otú ọ dị 1 Ndị Kọrint 9:20-21 bụ isi ihe iji ghọta na nke a abụghị ebe Pọl na-egosi na ọ bụ ezie na ọ nọghị n'okpuru iwu (nke Moses), na ọ nọghị n'okpuru iwu nke Chineke kama n'okpuru iwu nke Kraịst. (1 Ndị Kọrịnt 9:20-21). ]E ]E ]E ]E ggwgw onye nke na - emebi iwu n’iru Chineke n’ihi na m nọ n’okpuru iwu nke Kraist’ na n Nsụgharị Murdock. , (ọ bụ ezie na anọghị m ndị na-enweghị iwu n'ebe Chineke nọ, kama n'okpuru iwu nke Mesaịa ahụ). N'ihi ya, ọ bụghị ịgbaso iwu nke Moses agaghị abụ mmebi iwu, kama anyị nọ n'okpuru iwu nke Kraịst (Mesaịa). Ọ bụ ezie na a naghị emebi iwu ahụ, ọ dịghị emetụta ndị kwere na Kraịst.
(1 Ndị Kọrint 9:19-21) Ọ bụghị n’okpuru iwu—ọ bụghị n’okpuru iwu Chineke kama n’okpuru iwu Kraịst.
19 N'ihi na Enwere m onwe m n'ihe niile, Emeela m onwe m onye na -ejere mmadụ niile ozi, ka m wee nweta ọtụtụ n'ime ha. 20 N'ebe ndị Juu nọ, adịrị m ka onye Juu, ka m wee rite ndị Juu n'uru. N'ebe ndị nọ n'okpuru iwu, adịrị m ka onye nọ n'okpuru iwu (n'agbanyeghị na anọghị m n'okpuru iwu) ka m wee merie ndị nọ n'okpuru iwu. 21 N'ebe ndị na -anọghị n'okpuru iwu nọ, adịrị m ka onye na -anọghị n'okpuru iwu (na -anọghị n'iwu nke Chineke kama n'okpuru iwu nke Kraịst) ka m wee merie ndị na -anọghị n'iwu.
1 Ndị Kọrịnt 9: 19-21 (ESV), ọ bụghị n'okpuru iwu-anọghị na mpụga iwu Chineke kama n'okpuru iwu Kraịst
19 N'ihi na Enwere m onwe m n'ihe niile, Emeela m onwe m onye na -ejere mmadụ niile ozi, ka m wee nweta ọtụtụ n'ime ha. 20 N'ebe ndị Juu nọ, adịrị m ka onye Juu, ka m wee rite ndị Juu n'uru. N'ebe ndị nọ n'okpuru iwu, adịrị m ka onye nọ n'okpuru iwu (n'agbanyeghị na anọghị m n'okpuru iwu) ka m wee merie ndị nọ n'okpuru iwu. 21 Nye ndị na -anọghị n'okpuru iwu, adịrị m ka onye na -anọghị n'okpuru iwu (na -anọghị n'iwu nke Chineke kama n'okpuru iwu nke Kraịst) ka m wee merie ndị na -anọghị n'iwu.
1 Ndị Kọrịnt 9:21 (Aramaic Peshitta, Nsụgharị Lamsa)
"Nye ndị na -enweghị iwu, I dị ka onye na -enweghị iwu, n'agbanyeghị Anaghị m emebi iwu n'ihu Chineke n'ihi na anọ m n'okpuru iwu Kraịst, ka m wee merie ndị na -enweghị iwu. ”
1 Ndị Kọrịnt 9:21 (Peshitta Aramaic, ntụgharị Murdock)
“Nyekwa ndị na -enweghị iwu, Ọ dị m ka enweghị iwu, (ọ bụ ezie na abụghị m onye na -enweghị iwu nye Chineke, mana n'okpuru iwu nke Mesaịa) ka m wee nweta ndị na -enweghị iwu …….
Nkwa nke ngozi ka e nyere Abraham na ụmụ ya, onye bụ Kraịst. (Gal 3:16) Mgbe afọ 430 gachara, e gbakwunyere iwu ahụ n’ihi mmebi iwu, ruo mgbe mkpụrụ ahụ e kwere nkwa ga-abịara. (Gal 3:17-18) Ebe ọ bụ na a pụghị inweta ezi omume site n’iwu, iwu ahụ akagbughị nkwa Ebreham. Enyere iwu ahụ nke na-apụghị inye ndụ n'ihi na a pụghị iji iwu nweta ezi omume. (Gal 3:21) Kama nke ahụ, iwu ahụ bịara tụọ onye ọ bụla n'ime mmehie, ka e wee nye ndị kwere ekwe nkwa ahụ nke sitere n'okwukwe na Jizọs Kraịst. (Gal 3:22) Iwu ahụ kpụrụkwa ya, kwarakwa ya o da okwukwe ah n’abia. (Gal 3:23) Iwu ahụ bụ onye na-elekọta anyị ruo mgbe Kraịst bịara, ka e wee gua anyị na ndị ezi omume site n’okwukwe n’ịbụ ndị e mere baptizim baa na Kraịst, na ịbụ ndị a hụrụ n’ime Kraịst. (Gal 3:24-27) N'ihi na nime Kraist Jisus obibì-úgwù ma-ọbu ebìghi-úgwù adighi-aba uru ọ bula; ( Gal 5:6 ) N’ime Kraịst Jizọs, e nweghị onye Juu ma ọ bụ Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị. (Gal 3:28) Ọ bụrụ na anyị bụ nke Kraịst, mgbe ahụ anyị bụ ụmụ Ebreham, ndị nketa dị ka nkwa si dị. (Gal 3:29) Ọgbụgba ndụ nke mbụ metụtara ụmụ nwanyị ohu bụ́ ndị kwekọrọ na Jerusalem nke dị ugbu a, ọgbụgba ndụ nke abụọ metụtakwara ndị bụ ụmụ nke nwanyị nweere onwe ya bụ́ nke kwekọrọ na Jerusalem nke dị n’elu. (Ndị Gal 4:22-26). Ayi onwe-ayi bu Jerusalem ọhu nke nwere onwe-ya, amuworo site na nkwa dika umu-ndikom nke nwanyi ahu nwere onwe-ya. (Ndị Gal 4:26)
E debere iwu ahụ site n'aka ndị mmụọ ozi site n'aka onye na-arụkọ ọrụ nke dị ihe karịrị otu, ebe Chineke bụ otu. ( Gal 3:19 ) Ọ bụrụ na e gbanwee n’òtù ndị nchụàjà, iwu ahụ na-agbanwekwa. (Hib 7:12) Ndị nchụàjà bụ́ ndị na-arụ ọrụ dị ka iwu si dị na-enye onyinyo na onyinyo nke ihe eluigwe. (Hib 8:5) Kraịst enwetawo ozi nke dị nnọọ mma karịa nke ochie dị ka ọgbụgba ndụ ahụ ọ na-agbado dị mma, ebe ọ bụ na e mere ya ná nkwa ndị ka mma. (Hib 8:6) O d`dahay Uga Uga ' g የተሰራ <b>ọb͕ub͕a-ndu ohuru nke Mu na ulo Israel na ulo Juda meworo, ọ bughi dika ọb͕ub͕a-ndu ahu nke M'meworo. ha na ndị nna ha n’ụbọchị m’jidere ha n’aka ịkpọpụta ha n’ala Ijipt.” (Hib 8:8-9) N’aka nke ọzọ, e wepụrụ iwu mbụ n’akụkụ n’ihi adịghị ike ya na ihe na-abaghị uru (n’ihi na iwu ahụ emeghị ka ihe ọ bụla zuo okè), n’aka nke ọzọ, a na-ewebata olileanya ka mma bụ́ nke e si na ya mee ka anyị na Chineke dị ná mma. . (Hib 7:18-19)
Mụọ Nsọ na-egosi na a ka emeghebeghị ụzọ isi banye ebe nsọ ma ọ bụrụhaala na akụkụ nke mbụ nke nkwadebe (ihe atụ maka oge dị ugbu a) ka na-eguzo. (Hib 9:8) N’okpuru ọgbụgba ndụ mbụ ahụ, a na-achụ onyinye na àjà ndị na-apụghị imezu akọ na uche onye na-efe ofufe kama ọ bụ nanị ihe oriri na ihe ọṅụṅụ na ịsa ahụ́ dị iche iche, ụkpụrụ nke ahụ́ ndị e nyere iwu ruo n’oge mgbanwe. (Hib 9:9-10) Iwu ahụ bụ nanị onyinyo nke ihe ọma ndị gaje ịbịa kama ịbụ n'ezie ụdị nke ihe ndị a n'ezie. ( Hib 10:1 ) Mgbe Kraịst bịara n’ụwa, o kwuru, sị: “Àjà na àjà nkịtị ka ị chọghị, ma ahụ́ ka i doziri m.” (Hib 10:5) Mgbe o kwuru, sị: “Lee, abịara m ime uche gị, Chineke, dị ka e deworo banyere m n’akwụkwọ mpịakọta,” o wepụrụ iwu mbụ e ji mee ka nke abụọ guzosie ike. (Hib 10:7-9) Sitekwa n’uche ahụ e dowo anyị nsọ site n’àjà ahụ Jizọs Kraịst chụrụ otu ugboro. (Hib 10:10) Ya mere, unu ekwela ka onye ọ bụla kpee unu ikpe n'ihe banyere nri na ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ banyere ememme ma ọ bụ banyere ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike. (Kọl 2:16) Ihe ndị a bụ onyinyo nke ihe ndị gaje ịbịa, ma ihe mejupụtara ya bụ nke Kraịst. ( Ndị Kọl 2:18 )
Iwu a na -emetụta ma ọ bụrụhaala na mmadụ dị ndụ. (Ndị Rom 7: 1) Mgbe mmadụ nwụrụ, a tọhapụrụ ha n'iwu. (Ndị Rom 7: 2-3) N'otu aka ahụ, ndị bụ akụkụ ahụ nke Kraịst nwụrụ n'iwu, ka ha wee bụrụ nke onye ọzọ wee mịpụtara Chineke mkpụrụ. (Ndị Rom 7: 4) N'anụ ahụ, agụụ ime mmehie anyị, nke iwu kpaliri, nọ na -arụ ọrụ n'ime akụkụ anyị iji mịa mkpụrụ maka ọnwụ. (Ndị Rom 7: 5) Ma ugbu a, a tọhapụrụ anyị n'iwu, ebe anyị nwụrụ na nke dọọrọ anyị n'agha, ka anyị wee na -eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ, ọ bụghị n'ụzọ ochie nke koodu ederede. (Ndị Rom 7: 6) Ozi nke ọnwụ, nke a pịrị apị n'akwụkwọ ozi n'elu okwute, were ebube nke na -agwụ ugbu a. (2 Kọr 3: 7) Ozi nke mmụọ nsọ nwere ugbu a karịa ebube. (2 Ndị Kọrịnt 3: 8) N'ihi na ọ bụrụ na ebube dị n'ozi nke amamikpe, ozi ezi omume ga -akarị ya nke ukwuu n'ebube. (2 Ndị Kọrịnt 3: 9) Iwu nke nweburu otuto, enweghi nsọpụrụ ma ọlị; tụnyere ebube nke kariri ya. (2Kọ 3:10) N'ihi na ọ bụrụ na ihe ahụ e we weta ná njedebe bịara n'ebube, karịchaa, ihe na-adịgide adịgide karị. (2 Ndị Kọrint 3:11) Ndị obi ha kpọrọ nkụ, ruo taa, mgbe ọ bụla a gụrụ iwu Mozis, ihe mkpuchi na-adị n’elu obi ha. (2 Ndị Kọrịnt 3:13-15) Ebe Mmụọ nke Onyenwe anyị nọ, enwere nnwere onwe ma mgbe mmadụ chigharịkwuuru Onye -nwe, onye bụ Mụọ, a na -ewepụ akwa mkpuchi ahụ. (2 Kọr 3: 16-18) Site na ihu ekpughere, site n'ịhụ ebube nke Onye-nwe, a na-agbanwe anyị ka anyị bụrụ otu onyinyo ahụ site n'otu ogo ruo n'ọkwa ọzọ (2Cor 3:18)
Ndị Galetia 3: 16-22 (ESV), agbakwunyere iwu ahụ ruo mgbe mkpụrụ ahụ ga -abịakwute onye ahụ ekwerela ya
16 Ugbua ekwere Abraham na nkpuru ya nkwa. Ọ naghị asị, "Na ndị na -asụ mmiri," na -ekwu maka ọtụtụ, kama ọ na -ekwu maka otu, "Na mkpụrụ gị," onye bụ Kraịst. 17 Nke a bụ ihe m na-ekwu: iwu ahụ, nke bịara narị afọ anọ na iri atọ ka nke ahụ gasịrị, anaghị akagbu ọgbụgba ndụ nke Chineke kwadoro na mbụ, iji mee ka nkwa ahụ ghara ịdị irè. 18 N'ihi na asi na ihe -nketa sitere n'aka iwu, ọ bughi kwa site na nkwa; ma Chineke nyere Abraham site na nkwa. 19 Gịnị kpatara iwu? E tinyekwara ya n'ihi njehie, ruo mgbe mkpụrụ ahụ ga -abịakwute onye ahụ ekwerela ya, e sitekwara n'aka ndị mmụọ ozi tinye ya n'ọnọdụ. 20 Ugbu a onye ogbugbo na -egosi ihe karịrị otu, mana Chineke bụ otu. 21 Mgbe ahụ iwu ahụ ọ megidere nkwa Chineke? Ọ dịghị ma ọlị! N'ihi na asi na enyere iwu nke puru ime ka ndu di ndu, ezi omume g wouldsite kwa n'iwu ahu. 22 Ma Akwụkwọ Nsọ jidere ihe niile n'okpuru mmehie, ka e wee nye ndị kwere ekwe nkwa ahụ site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst.
(Ndị Galetia 3: 23-29) Iwu bụ onye nche anyị ruo mgbe Kraịst bịara
23 Ma tupu okwukwe abịarute, anyị bụ ndị a dọtara n'agha n'okpuru iwu, nọkwa n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe a ga -ekpughe okwukwe na -abịanụ. 24 Yabụ, iwu bu onye -nche -ayi rue mb Christe Kraist biara, ka ewe site n'okwukwe gu ayi na ndi ezi omume. 25 Mana ugbu a okwukwe abịala, anyị anọkwaghị n'okpuru onye nlekọta, 26 n'ihi na nime Kraist Jisus unu nile bu umu Chineke, site n'okwukwe. 27 N'ihi na ka unu ra, bú ndi emere baptism iba nime Kraist, unu yikwasiri Kraist. 28 E nweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghị ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, nwoke na nwanyị adịghị, n'ihi na unu niile bụ otu onye n'ime Kraịst Jizọs. 29 Ọ bụrụkwa na unu bụ nke Kraịst, mgbe ahụ unu bụ ụmụ Abraham, ndị nketa dị ka nkwa si dị.
(Ndị Galetia 4: 20-26) Ndị inyom a bụ ọgbụgba ndụ abụọ
20 Ọ dị m ka ya bụrụ na mụ na gị nọ ugbu a wee gbanwee ụda m, n'ihi na enwere m mgbagwoju anya banyere gị. 21 Gwa m, unu ndị chọrọ ịnọ n'okpuru iwu, ùnu adịghị ege ntị n'iwu? 22 N'ihi na edewo ya n'akwụkwọ na Abraham nwere ụmụ nwoke abụọ, otu site na nwanyị ohu na otu site na nwanyị nweere onwe ya. 23 Ma amụwo nwa nke ohu ahụ dị ka anụ ahụ si dị, ebe amụrụ nwa nke nwanyị nwere onwe ya site na nkwa. 24 Ugbu a enwere ike ịkọwa nke a n'ụzọ ihe atụ: ndị inyom a bụ ọgbụgba ndụ abụọ. Otu sitere n'ugwu Saịnaị, na -amụ ụmụ maka ịbụ ohu; ọ bụ Hega. 25 Ma Hega bụ ugwu Saịnaị nke Arebia; o kwekọrọ na Jerusalem nke ugbu a, n'ihi na ya na ụmụ ya nọ n'ohu. 26 Ma Jerusalem nke dị n'elu nweere onwe ya, ọ bụkwa nne anyị.
Ndị Galetia 5: 6 (NIV) Kraịst Jizọs enweghị ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù bara uru
N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs ọ bụghị ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù abụghị ihe ọ bụla, kama ọ bụ naanị okwukwe na -arụ ọrụ site n'ịhụnanya.
(Ndị Hibru 7: 11-12) Ebe ọ bụ na a gbanwere mgbanwe n'ọkwa nchụ -aja, a gbanwere iwu
11 Ugbu a ọ bụrụ na a ga -enweta izu -oke site na ọkwa nchụ -aja nke ndị Livaị (n'ihi na n'okpuru ya ka ndị mmadụ nwetara iwu), kedu ihe ọzọ ga -adị onye ụkọchukwu ọzọ ibilite dịka usoro Melkizedek siri dị, kama ịkpọ aha dị ka usoro Erọn si dị? 12 N'ihi na mgbe enwere mgbanwe n'ọkwa nchụ -aja, a ga -enwerịrị mgbanwe n'iwu.
(Ndị Hibru 7: 18-19) A na -ewepụ iwu nke mbụ n'ihi adịghị ike ya na abaghị uru ya
18 N'ihi na n'otu aka, a na -ewepụ iwu mbụ n'ihi adịghị ike ya na abaghị uru ya 19 (n'ihi na iwu emeghị ihe ọ bụla zuru oke); mana n'aka nke ọzọ, ewebata olile anya ka mma, nke anyị ji abịaru Chineke nso.
(Ndị Hibru 8: 4-13) N'ikwu banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ na -eme ka nke mbụ bụrụ ihe mgbe ochie
Ugbu a ọ bụrụ na ọ nọ n'ụwa, ọ gaghị abụ onye nchụàjà ma ọlị, ebe enwere ndị nchụàjà na -enye onyinye dị ka iwu si dị. 5 Ha na -ejere nnomi na onyinyo nke ihe dị n'eluigwe. N'ihi na mgbe Mozis na -achọ iwuli ụlọikwuu ahụ, Chineke ziri ya ozi, na -asị, "Hụ na ị ga -eme ihe niile dịka ụkpụrụ ahụ nke egosiri gị n'ugwu." 6 Mana dịka ọ dị ugbu a, Kraịst enwetala ozi nke dị oke mma karịa nke ochie dịka ọgbụgba ndụ ọ na -eme ka ọ dị mma, ebe ọ bụ na etinyere ya na nkwa ndị ka mma.. 7 N'ihi na asi na ọb covenantub covenanta -ndu mbu ahu bu ihe n faultnweghi ntupọ, agaghi -enwe kwa oge ichere nke -abua.
8 N'ihi na ọ na -ahụta mmejọ ha mgbe ọ na -ekwu: "Le, ubọchi nābia, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), mb Ie Mu na ulo Israel gāb establisha ọb covenantub newa -ndu ọhu ya na ulo Juda, 9 ọ bụghị dị ka ọgbụgba ndụ mụ na nna nna ha gbara n’ụbọchị m jidere ha n’aka ka m kpọpụta ha n’ala Ijipt. N'ihi na ha adighi -anọgide n'ọb covenantub mya -ndum, M'we cheb foru ha, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. 10 N'ihi na nke a bụ ọgbụgba ndụ nke mụ na ụlọ Izrel ga -agba mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, ka Onye -nwe -anyị kwuru: M ga -etinye iwu m n'obi ha, deekwa ya n'obi ha, M'gābu -kwa -ra ha Chineke, ha onwe -ha gābu -kwa -ram otù ndi. 11 Ma ha agaghị akụzi, onye ọ bụla onye agbata obi ya na nwanne ya nwoke, na -asị, 'Mara Onyenwe anyị,' n'ihi na ha niile ga -ama m, site n'onye kacha nta n'ime ha ruo n'onye kacha ukwuu. 12 N’ihi na m ga -emere ajọ omume ha ebere, agakwaghị m echeta mmehie ha. ” 13 N'ikwu banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ na -eme ka nke mbụ bụrụ ihe mgbe ochie. Na ihe na -akawanye nká ma na -aka nka dị njikere ịpụ n'anya.
Ndị Hibru 9: 8-10 (ESV), na-eme naanị-na ụkpụrụ maka ahụ etinyere ruo oge mgbanwe
8 Site na nke a, Mmụọ Nsọ na -egosi na emepebeghị ụzọ n'ime ebe nsọ ma ọ bụrụhaala na akụkụ nke mbụ ka kwụ 9 (nke bụ ihe atụ maka afọ ugbu a). Dị ka ndokwa a si dị, a na -enye onyinye na àjà nke na -enweghị ike ime ka akọ na uche onye na -efe ya zuo oke, 10 mana ọ bụ naanị maka nri na ihe ọ drinkụ andụ na ịsa ahụ dị iche iche, ụkpụrụ maka ahụ arụpụtara ruo oge mgbanwe.
(Ndị Hibru 10: 1-10) Ọ na -ewepụ nke mbụ iji guzobe nke abụọ.
1 N'ihi na kemgbe iwu nwere naanị onyinyo nke ihe ọma ndị gaje ịbịa kama ịbụ ụdịdị nke ihe ndị a n'ezie, ọ nweghị ike, site n'otu aja ahụ a na -achụ kwa afọ, mee ka ndị na -abịaru nso zuo oke. 2 Ma ọ bụghị ya, ọ bụ na ha agaraghị akwụsị inye onyinye, ebe ndị na -efe ofufe, ebe ọ bụ na emechara ka ha dị ọcha, agakwaghị enwe mmụọ nke mmehie? 3 Ma n'àjà ndị a, a na -echeta mmehie kwa afọ. 4 N'ihi na ọbara oke ehi na ewu agaghị ewepụ mmehie. 5 N'ihi ya, mgbe Kraịst bịara n'ụwa, ọ sịrị, “Ị chọghị àjà na onyinye, kama ị kwadebere m anụ ahụ; 6 n'àjà nsure ọkụ na àjà mmehie adịghị atọ gị ụtọ. 7 M wee sị, 'Lee, abịara m ime uche gị, Chineke, dika edeworo n'akwukwọ nsọ n'akwukwọ bayerem'" 8 Mgbe o kwuru n'elu, "Ị chọghị ma ọ bụ nwee mmasị na àjà na onyinye na àjà nsure ọkụ na àjà mmehie" (a na -enye ha dịka iwu siri dị), 9 mgbe ahụ ọ gbakwụnyere, "Lee, abịara m ime uche gị." Ọ na -ewepụ nke mbụ iji guzobe nke abụọ. 10 Ọ bu kwa site n'ọchichọ ahu ka edoro ayi nsọ site n'ichu aru Jisus Kraist otù ub forò.
Ndị Kọlọsi 2: 16-23 Ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst
16 Ya mere ekwela ka onye ọ bụla kpee gị ikpe n'ihe banyere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ma ọ bụ n'ihe gbasara ememme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike. 17 Ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst. 18 Ekwela ka onye ọ bụla mee ka ị ghara iru eru, na -ekwusi ike n'ịchụ akụnụba na ofufe ndị mmụọ ozi, na -aga n'ihu n'ụzọ zuru ezu banyere ọhụụ, na -enwe uche nke anụ ahụ fụliri elu n'enweghị ihe kpatara ya, 19 ma ghara ijidesi Isi ahụ ike, onye anụ ahụ niile na -azụ ma na -ejikọ ọnụ site na nkwonkwo ya na akwara ya, na -eto na uto nke sitere na Chineke. 20 Ọ bụrụ na gị na Kraịst nwụrụ nye mmụọ nke ụwa, gịnị kpatara, dị ka a ga -asị na ị ka dị ndụ n'ụwa, ị na -edo onwe gị n'okpuru ụkpụrụ- 21 "Ejila aka, Enetụla ire, emetụla aka" 22 (na -ekwu maka ihe niile na -ala n'iyi ka ejiri ya mee ihe) - dịka iwu na nkuzi mmadụ siri dị? 23 N'ezie ndị a nwere ngosi nke amamihe n'ịkwalite okpukpe mere onwe ha na ịchụnta ego na ịdị arọ n'ahụ, mana ha abaghị uru n'ịkwụsị imeju anụ ahụ.
(Ndị Rom 7: 1-6) Ugbu a, a tọhapụrụla anyị n'iwu
1 Ma ọ bụ na unu amaghị, ụmụnna m, n'ihi na m na -agwa ndị maara iwu okwu, na iwu dịgidere mmadụ naanị mgbe ọ dị ndụ? 2 N'ihi na iwu ejikọtara nwanyị lụrụ di na di ya mgbe ọ dị ndụ, ma ọ bụrụ na di ya anwụọ a tọhapụrụ ya na iwu alụmdi na nwunye. 3 N'ihi ya, a ga -akpọ ya nwanyị na -akwa iko ma ọ bụrụ na ya na nwoke ọzọ ebiri mgbe di ya dị ndụ. Ma ọ bụrụ na di ya anwụọ, ọ nwere onwe ya n'iwu ahụ, ọ bụrụkwa na ọ lụọ nwoke ọzọ ọ bụghị nwanyị na -akwa iko.
4 N'otu aka ahụ, ụmụnna m, unu nwụkwara n'iwu site n'ahụ Kraịst, ka unu wee bụrụ nke onye ọzọ, nye onye ahụ e mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ka anyị wee mịa mkpụrụ nye Chineke. 5 N'ihi na mgbe anyị na -ebi n'anụ ahụ, agụụ ime mmehie anyị, nke iwu kpaliri, nọ na -arụ ọrụ n'ime akụkụ anyị anyị ịmị mkpụrụ maka ọnwụ. 6 Ma ugbu a, a tọhapụrụ anyị n'iwu, ebe anyị nwụrụ nye ihe dọọrọ anyị n'agha, ka anyị wee na -eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ, ọ bụghị n'ụzọ ochie nke koodu ederede..
2 Ndị Kọrịnt 3: 7-18. Mgbe ha gụrụ ọgbụgba ndụ ochie ahụ, otu ihe mkpuchi ahụ ka anaghị ebuli elu
7 Ugbu a ọ bụrụ ozi nke onwu, nke edere n'akwụkwọ ozi n'elu okwute, bịara n'ebube dị ukwuu nke na ụmụ Izrel enweghị ike ịhụ ihu Mozis n'ihi ebube ya, nke a na -eme ka ọ gwụ. 8 ije -ozi nke Mọ Nsọ, ọ̀ gaghi -enwe ebube kari kari? 9 N'ihi na asi na otuto di n'ozi nke amam -ikpe, ozi nke ezi omume ga -akarị ya nke ukwuu n'ebube. 10 N'ezie, na nke a, ihe nweburu ebube mgbe ọ na -enweghị ebube ọ bụla; n'ihi ebube nke karịrị ya. 11 N'ihi na ọ bụrụ na ihe a na -eweta na njedebe bịara n'ebube, ọtụtụ ga -eme ihe na -adigide nwere otuto. 12 Ebe anyị nwere olile anya dị otu a, anyị nwere oke obi ike, 13 ọ bụghị dị ka Mosis, onye ga -ekpuchi ihe mkpuchi ihu ya ka ndị Izrel ghara ile anya na ọ ga -esi nke ihe a na -eweta njedebe. 14 Ma obi ha kpọchiri akpọchi. N'ihi na ruo taa, mgbe ha na -agụ ọgbụgba ndụ ochie ahụ, otu ihe mkpuchi ahụ adịghị ebuli elu, n'ihi na ọ bụ naanị site na Kraịst ka ewepụrụ ya. 15 Ee, ruo taa mgbe ọ bụla a na -agụ Mozis ihe mkpuchi na -adị n'obi ha. 16 Ma mgbe mmadụ chigharịkwuuru Onyenwe anyị, a na -ewepụ ihe mkpuchi ahụ. 17 Ugbu a Onyenwe anyị bụ Mmụọ, ebe Mmụọ nke Onyenwe anyị nọkwa, enwere nnwere onwe. 18 Ma anyị niile, na -ekpuchighị ihu, na -ahụ ebube nke Onyenwe anyị, a na -agbanwe anyị ka ọ bụrụ otu onyinyo ahụ site n'otu ogo ruo n'ọzọ.. N'ihi na nke a sitere n'aka Onyenwe anyị bụ Mmụọ.
Mozis n’onwe ya buru amụma banyere Kraịst na-asị: “Onyenwe anyị Chineke ga-eme ka onye amụma dị ka m biliere unu n’etiti ụmụnne unu—ọ bụkwa ya ka unu ga-ege ntị.” (Diut 18:15) N’ikwu nke a, Mozis mere ka o doo anya na onye ahụ nke gaje ịbịa ga-abụ onye ọchịchị ka ya, ebe Pita gbakwụnyere, “Ọ ga-abụ na mkpụrụ obi ọ bụla nke na-adịghị ege onye amụma ahụ ntị ga-abụ. e bibiri ndị mmadụ.” ( Ọrụ 3:23 ) Pita gwara ụlọ Izrel niile n’ụzọ doro anya na Chineke emewo Jizọs Onyenwe anyị na Kraịst. ( Ọrụ 2:36 ) N’ịghọtakwu Jizọs dị ka ikike bụ́ isi, Pita kpọsara na Chineke buliri ya elu n’aka nri ya dị ka onye ndú na onye nzọpụta, iji nye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie. (Ọrụ 5:31). Jizọs bụ onyeozi (onye ozi) na onye isi nchụàjà (onye ogbugbo) nke nkwupụta anyị. (Hib 3:1) N'ihi na a gụwo Jizọs n'onye ruru eru inweta otuto karịa Mozis. (Hib 3:3) Mozis kwesịrị ntụkwasị obi n'ụlọ Chineke dum dị ka ohu, ịgba akaebe banyere ihe ndị a ga-ekwu n'ikpeazụ. ( Hib 3:5 ) Ugbu a Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi n’ụlọ Chineke dị ka nwa nwoke, anyị bụkwa ụlọ ya. (Hib 3:6) N’ihi na Chineke ṅụụrụ Kraịst iyi, na ọ bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi na ọ gaghị agbanwe obi ya—nke a na-eme ka Jizọs bụrụ onye na-akwado ọgbụgba ndụ ka mma. (Hib 7:21-22)
Kraịst enwetala ozi nke dị oke mma karịa nke ochie dịka ọgbụgba ndụ nke ọ na -eme ka ọ dị mma, ebe ọ bụ na etinyere ya na nkwa ndị ka mma. (Ndị Hibru 8: 6) Ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka ndị akpọrọ wee nweta ihe nketa ebighi -ebi ekwere na nkwa, ebe ọ bụ ọnwụ nwụrụ nke na -agbapụta ha na mmebi iwu ndị emere n'okpuru ọgbụgba ndụ nke mbụ. (Ndị Hibru 9:15) Ndị nọ na Kraịst ga -abịa n'Ugwu Zayọn na obodo nke Chineke dị ndụ, Jerusalem nke eluigwe, na ọtụtụ ndị mmụọ ozi na nnọkọ oriri na ọ andụ ,ụ, na nzukọ nke ndị e bu ụzọ mụọ nke edebara aha ha n'eluigwe, na Chineke, onye ikpe nke mmadụ niile, na mmụọ nke ndị ezi omume emezuru ka ọ zuo oke, na Jizọs, onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ. (Ndị Hibru 12: 22-24) Chineke onye nzọpụta anyị chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile na ka ha bịaruo ihe ọmụma nke eziokwu-n'ihi na otu Chineke dị, otu onye ogbugbo dịkwa n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs. (1Ti 2: ​​4-5)
(Deuterọnọmi 18:15) Ọ bụ ya ka ị ga -ege ntị
15 "Jehova bụ́ Chineke gị ga -esi n’etiti gị, n’etiti ụmụnne gị, kpọlitere gị onye amụma nke dị ka m-ọ bụ ya ka ị ga -ege ntị-
Ọrụ 3: 22-23 (NIV) Mozis sịrị, 'Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị'
22 Moses we si, Onye -nwe -ayi Jehova g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti umu -nne -gi. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị.23 Ọ gēru kwa, na nkpuru-obi ọ bula nke nāgaghi-ege nti onye-amuma ahu, agēbipu ya n'etiti ndi Israel.
Ọrụ Ndịozi 2:36 (NIV) Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst
Ọrụ 5:31 (ESV), Chineke buliri ya elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta
31 Chineke buliri ya elu n'aka nri ya ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta, inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie.
(Ndị Hibru 3: 1-6) A gụọla Jizọs dị ka onye tozuru oke karịa Moses
1 Ya mere, ụmụnna nsọ, unu ndị na -ekere oke ọkpụkpọ eluigwe, tụgharịa uche Jizọs, onye ozi na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị, 2 onye kwesiri ntukwasi -obi nye onye họputara ya, dika Moses kwesiri ntukwasi -obi n'ulo Chineke nile. 3 N'ihi na a gụwo Jisọs dị ka onye ruru eru ka ukwuu karịa Mozis, ka otuto dị ka onye na -ewu ụlọ si dị ukwuu karịa ụlọ ahụ n'onwe ya.. 4 (N'ihi na ụlọ ọ bụla nwere onye rụrụ ya, ma onye rụrụ ihe niile bụ Chineke.) 5 Ma Moses kwesiri ntukwasi -obi n'ulo Chineke nile dika onye n servantje ozi, ka ọ bfya àmà n'ihe nile nke ag bekwu n'ikpe -azu. 6 ma Kraist kwesiri ntukwasi -obi n'ulo Chineke dika nwa. Ayi onwe -ayi bu kwa ulo -Ya, ọ buru na ayi ejidesi ntukwasi -obi -ayi ike na inya -isi -ayi n'olile -anya -ayi.
(Ndị Hibru 7: 20-22) Nke a na -eme ka Jizọs bụrụ onye nkwado nke ọgbụgba ndụ ka mma
20 E mere ndị bụbu ndị nchụ -aja ụdị nke ahụ na -enweghị ịńụ iyi, 21 ma onye a mere onye nchụ -aja site na onye ahụ nke sịrị ya:Jehova a swornụwo iyi na ọ gaghị agbanwe obi ya, sị, 'Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi.'" 22 Nke a na -eme ka Jizọs bụrụ onye nkwado nke ọgbụgba ndụ ka mma.
Ndị Hibru 8: 6-8 (ESV), A ije ozi - dị oke mma karịa nke ochie dịka ọgbụgba -ndụ ọ na -agbazi dị mma
6 Mana ka ọ dị, Kraịst enwetala ozi nke dị oke mma karịa nke ochie dịka ọgbụgba ndụ nke ọ na -eme ka ọ dị mma, ebe ọ bụ na etinyere ya na nkwa ndị ka mma.. 7 N'ihi na asi na ọb covenantub covenanta -ndu mbu ahu bu ihe n faultnweghi ntupọ, agaghi -enwe kwa oge ichere nke -abua. 8 N'ihi na ọ na -ahụta mmejọ ha mgbe ọ na -ekwu: “Lee, ụbọchị na -abịa, ka Jehova kwuru, mgbe m ga -eme ka o guzosie ike ọgbụgba ndụ ọhụrụ ya na ulo Israel na ulo Juda
Ndị Hibru 9: 15 (NIV) Ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ
15 Ya mere ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka ndị akpọrọ wee nata ihe nketa e kwere na nkwa ebighi ebi, ebe onwu nwuru nke naputa ha na njehie ha mere n'okpuru ogbugba ndu mbu.
(Ndị Hibru 12: 22-24) Nye Jizọs, onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ
22 Mana ị bịarutela ugwu Zaịọn na obodo nke Chineke dị ndụ, Jerusalem nke eluigwe, na ọtụtụ ndị mmụọ ozi na nnọkọ oriri, 23 nye nzukọ nke ndị e bu ụzọ mụọ ndị edebara aha ha n'eluigwe, nyekwa Chineke, onyeikpe nke mmadụ niile, na mmụọ nke ndị ezi omume e mere ka ha zuo oke, 24 na Jizọs, onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, na ọbara a fesara efesa nke na -ekwu okwu ka mma karịa ọbara Ebel.
(Gụọ 1 Timoti 2: 5-6.) E nwere otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs
5 N'ihi na otu Chineke dị, otu onye ogbugbo dịkwa n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, 6 onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, nke bụ ọgbụgba ama nyere n'oge ya.
Ọrụ Ndịozi na -ekwusi ozi ozi ọma bụ isi na, 'kwa ụbọchị, n'ụlọ nsọ na site n'ụlọ ruo n'ụlọ, ha akwụsịghị izi ihe na ikwusa na Kraịst bụ Jizọs.' (Ọrụ 5:42, Ọrụ 2:36, Ọrụ 9:22, Ọrụ 17: 3, Ọrụ 18: 5) Pita kwupụtara ịdị ukwuu nke Kraịst mgbe ọ kwupụtara, “Ya mere, ka ụlọ Izrel niile mara nke ọma na Chineke mere ya ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a nke ị kpọgidere n'obe. ” (Ọrụ 2: 36) O wee sị, "Chineke buliri ya elu n'aka nri ya ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie." (Ọrụ 5:31) Nke dị oke mkpa bụ na Jizọs bụ onye amụma nke Mozis kwuru maka ya, "Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị." (Deut 18:15) Pita matara na iso Kraịst karịa onye ọ bụla bụ ihe kachasị mkpa, na -asị, "Ọ ga -abụ na mkpụrụ obi ọ bụla nke na -egeghị onye amụma ahụ ntị, a ga -ebibi ya na ndị mmadụ." (Ọrụ 3:23)
Ịkpọsa mbilite n’ọnwụ site n’ọnụ Jisọs kpasuru ndị ndú ndị Juu iwe. ( Ọrụ 4:1-2 ) Stifen, baara ha mba na-ekwusi ike na Onye Kasị Elu adịghị ebi n’ụlọ e ji aka wuo (na-emebi mkpa ụlọ nsọ ahụ) nakwa na ndị ndú ndị Juu bụ ndị gbasiri olu ike, ndị na-enweghị ọnọdụ obi na ntị, mgbe nile na-emegide Mmụọ Nsọ. ( Ọrụ 7:48-51 ) Stivin sịrị: “Ònye n’ime ndị amụma na nna unu hà na-akpagbughị? + Ha wee gbuo ndị ahụ buru ụzọ kpọsaa ọbịbịa nke Onye ezi omume ahụ, onye unu raara nye ma gbuo.” ( Ọrụ 7:52 ) O mechiri site n’ikwu na n’agbanyeghị na ha natara iwu ahụ dị ka ndị mmụọ ozi nyere ha, ha edebebeghị iwu ahụ n’ịma Kraịst ikpe. ( Ọrụ 7:53 ) Nke a were ha iwe, ha wee chụpụ ya n’obodo ahụ ma tụgbuo ya na nkume. (Ọrụ 7:58)
N’ịpụga n’ihu n’echiche ndị Juu, Chineke kpugheere Pita, sị, “Ekwesịghị m ịkpọ onye ọ bụla onye nkịtị ma ọ bụ onye na-adịghị ọcha” n’agbanyeghị na iwu akwadoghị ka onye Juu na onye mba ọzọ na-akpakọrịta ma ọ bụ gaa leta ya. ( Ọrụ 10:28 ) Pita kwusiri ike, sị: “N’ezie, aghọtara m na Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu, kama ná mba ọ bụla, onye ọ bụla nke na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume bụ onye ọ na-anabata nke ọma.” ( Ọrụ 10:34-35 ) O juru ndị kwere ekwe so ná ndị e biri úgwù anya n’ihi na a wụkwasịrị ndị Jentaịl onyinye nke Mmụọ Nsọ. ( Ọrụ 10:45 ) Mgbe Pita kọrọ akụkọ ahụ ma kwuo, sị: “Chineke nyere ha otu onyinye ahụ o nyere anyị mgbe anyị kweere na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ònye ka m bụ na m pụrụ iguzo n’ụzọ Chineke?” ( Ọrụ 11:17 ) N’ịnụ nke a, ndị Jerusalem kwetara na, nyekwa ndị Jentaịl, Chineke enyewo nchegharị nke na-eduba ná ndụ. (Ọrụ 11:18)
Na Jeruselem, ụfọdụ ndị kwere ekwe bụ́ ndị so n’òtù ndị Farisii biliri, sị, banyere ndị Jentaịl kwere ekwe, “Ọ dị mkpa ka e bie ha úgwù na inye ha iwu ka ha debe iwu Mozis.” ( Ọrụ 15:5 ) Pita biliri megide ha, sị: “Gịnị mere unu ji na-anwale Chineke site n’itinye yok n’olu nke ndị na-eso ụzọ Jizọs nke nna anyị hà ma anyị onwe anyị na-apụghị iburu?” ( Ọrụ 15:10 ) Ihe e kpere Jems, bụ́ onye ndú nke chọọchị Jerusalem, bụ “anyị ekwesịghị inye ndị Jentaịl nsogbu, bụ́ ndị na-echigharịkwuru Chineke, kama ka anyị degara ha akwụkwọ ka ha zere ihe arụsị rụrụ arụ, na inwe mmekọahụ aghara aghara. omume rụrụ arụ, na site n’ihe a nyagburu anyagbu, na site n’ọbara. (Ọrụ 15:19). Akwụkwọ ozi ahụ kwuru sị, 'Ọ dị mma n'anya Mmụọ Nsọ na anyị ka anyị ghara ibikwasị gị ibu dị arọ karịa ihe ndị a. ( Ọrụ 15:28-29 ) N’ikpe ikpe dị otú ahụ banyere ndị Jentaịl, ha nọ na-ekwusi ike na ịgbaso iwu Mozis abụghị ihe dị mkpa a chọrọ n’aka ịbụ onye na-eso ụzọ Kraịst.
Ihe anyị na -ahụ n'Ọrụ Ndịozi bụ na ozioma nke Jizọs Kraịst kpuchiri iwu Moses ebe Pọl siri, "Onye ọ bụla kwere ekwe nwere onwe ya pụọ ​​n'ihe niile nke iwu Moses na -apụghị ịtọhapụ gị n'ime ya." (Ọrụ 13:39) N'ịzaghachi ozi Pọl, ụfọdụ ndị Juu nwere anyaụfụ wee malite imegide ihe Pọl kwuru, na -ekwujọ ya. (Ọrụ 13:45) Nzaghachi Pọl na Banabas bụ, “Ọ dị mkpa ka ebu ụzọ gwa unu okwu Chineke - ebe unu tụfuru ya wee kpee onwe unu ikpe na -erughị eru maka ndụ ebighị ebi, lee, anyị na -agakwuru ndị mba ọzọ. . (Ọrụ 13:46) Mgbe e mechara, e boro Pọl ebubo na ọ kuziri ndị Juu niile nọ n'etiti ndị Jentaịl ka ha hapụ Mozis, na -agwa ha ka ha ghara ibi ụmụ ha úgwù ma ọ bụ jee ije dị ka omenala ha si dị. (Ọrụ 21:21)
N’Ọlụ Ndị Ozi, ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ na-akagbu ndị ochie ka ndịozi gbara ama maka ịdị ukwuu nke Kraịst bụ Jizọs. ( Ọrụ 5:42, Ọrụ 2:36, Ọrụ 9:22, Ọrụ 17:3, Ọrụ 18:5 ) Ha kwusara na Jizọs bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. ( Ọrụ 10:42 ) Ndị amụma niile na-agbara ya àmà na onye ọ bụla nke kwere na ya na-anata mgbaghara mmehie site n’aha ya. ( Ọrụ 10:43 ) Chineke ahọpụtala ya ka ọ na-ekpe ụwa ikpe n’ezi omume. ( Ọrụ 17:31 ) Nke a bụ ihe Mozis kwuru banyere ya, sị: “Ị ga-egekwa ya ntị n’ihe ọ bụla ọ ga-agwa gị.” (Ọrụ 3:22-23)
Ọrụ 2: 34-39 (NIV) Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a
34 N'ihi na Devid arịgoghị n'eluigwe, mana ya onwe ya na -asị, '' Onyenwe anyị gwara Onyenwe m, Nọdụ ala n'aka nri m, 35 rue mb͕e M'gēme ka ndi-iro-Gi buru ihe-nb͕akwasi-ukwu-Gi. 36 Ya mere ka ulo Israel nile mara n'ezie na Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe. " 37 Ma mb͕e ha nuru nka, ha tib͕uru ha n'obi, si Pita na ndi-ozi fọduru, Umu-nnam, gini ka ayi gēme? 38 Pita wee sị ha, “Chegharịanụ ka e meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu, unu ga -anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.. 39 N'ihi na nkwa dịịrị gị na ụmụ gị na ndị niile nọ ebe dị anya, onye ọ bụla Onye -nwe Chineke anyị na -akpọ onwe ya. ”
Ọrụ Ndị Ozi 3: 17-23 (Moses)Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị '
17 Ma ub͕u a, umu-nnam, amataram na unu mere ihe n'amaghi-ama, dika ndi-isi-unu. 18 Ma ihe Chineke buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraist ya ga-ata ahụhụ, o mezuru. 19 Ya mere, chègharianu, chigharia, ka ehichapu nmehie nile unu, 20 ka oge inweta ume ga -esi n'ihu Onyenwe anyị bịa, na ka o wee zite Kraịst nke a họpụtara nye unu, Jisus, 21 bụ onye eluigwe ga-enwerịrị ruo mgbe ọ ga-eweghachite ihe niile Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga. 22 Moses we si, Onye -nwe -ayi Jehova g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti umu -nne -gi. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị.23 Ọ gēru kwa, na nkpuru-obi ọ bula nke nāgaghi-ege nti onye-amuma ahu, agēbipu ya n'etiti ndi Israel.
Ọrụ 4: 1-2 (NIV) Ha na -ezi ndị mmadụ ihe ma na -ekwusa na Jizọs mbilite n'ọnwụ
1 Ma mb͕e ha nāgwa ndi-Ju okwu, ndi-nchu-àjà na onye-isi ulo uku Chineke na ndi-Sadusi biakutere ha, 2 iwe were ha nke ukwuu n'ihi na ha na -akuziri ndị mmadụ na na -ekwusa na Jizọs mbilite n'ọnwụ.
Ọrụ 5: 30-32 (NIV) Chineke buliri ya elu n'aka nri ya ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta, inye Israel nchegharị
30 Chineke nke nna-ayi-hà mere ka Jisus bilie, Onye I b͕uru site n'osisi Ya n'elu osisi. 31 Chineke buliri ya elu n'aka nri ya ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta, inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie. 32 Ayi onwe-ayi bu kwa ndi-àmà nke ihe ndia; Mọ Nsọ di kwa, Onye Chineke nyeworo ndi nāṅa Ya nti.
Ọrụ 5: 40-42 (NIV), They akwụsịghị izi ihe na ikwusa na Kraịst bụ Jizọs
40 mgbe ha kpọbatara ndịozi, ha pịa ha ihe ma nye ha iwu ka ha ghara ikwu okwu n'aha Jizọs, hapụ ha ka ha laa. 41 Ha we rapu nnọkọ-ikpé ahu, nāicinguri na aguru ha na ndi kwesiri ka eme ha ihe-ihere n'ihi Aha ahu. 42 na kwa ụbọchị, n'ụlọ nsọ na site n'ụlọ ruo n'ụlọ, ha akwụsịghị izi ihe na ikwusa na Kraịst bụ Jizọs.
Ọrụ 7: 48-53 (NIV) Onye Kasị Elu adịghị ebi n'ụlọ e ji aka rụọ
48 Ma Onye Kasị Elu adịghị ebi n'ụlọ e ji aka rụọ, dika onye -amuma kwuru, 49 Eluigwe bụ ocheeze m, ụwa bụkwa ihe mgbakwasị ụkwụ m. 50 Ọ bughi akam mere ihe ndia nile? 51 “Unu ndị na-ekwesi olu ike, ndị a na-ebighị úgwù n'obi na ntị, ị na -eguzogide Mmụọ Nsọ mgbe niile. Dị ka nna nna unu mere, unu onwe unu. 52 Nye n'ime ndị amụma ka nna nna unu hà na -akpagbughị?? Ha wee gbuo ndị kwupụtara ọbịbịa nke Onye ezi -omume, onye ị raara nye ugbu a ma gbuo ya, 53 gị onye natara iwu dịka ndị mmụọ ozi nyefere ya ma ị debeghị ya. "
Ọrụ Ndịozi 10:28 (NIV) Chineke gosiri m na agaghị m akpọ mmadụ ọ bụla onye rụrụ arụ ma ọ bụ onye na -adịghị ọcha
28 O wee sị ha, "Unu onwe unu maara na iwu akwadoghị ka onye Juu soro ma ọ bụ gaa leta onye mba ọzọ, mana Chineke egosila m na agaghị m akpọ onye ọ bụla onye rụrụ arụ ma ọ bụ onye na -adịghị ọcha..
Ọrụ Ndịozi 10: 34-43 (I.mba ọ bụla onye na -atụ egwu ya ma na -eme ezi ihe bụ onye ọ na -anabata nke ọma
34 Ya mere, Pita meghere ọnụ ya wee sị: “N'ezie aghọtara m nke ahụ Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu, 35 ma na mba ọ bụla onye na -atụ egwu ya ma na -eme ezi ihe bụ onye ọ na -anabata nke ọma. 36 Maka okwu o zigara ya Israel, na -ekwusa ozi ọma nke udo site na Jizọs Kraịst (ọ bụ Onyenwe mmadụ niile), 37 unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mb thee baptism nke Jọn kwusara siri, 38 ka Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya. 39 Anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe niile o mere ma n'obodo ndị Juu ma na Jerusalem. Ha gburu ya n'osisi n'elu osisi, 40 ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ wee mee ka ọ pụta ìhè, 41 ọ bughi madu nile, kama ọ bu ayi, ndi Chineke rọputara ibu ndi -àmà, ndi soro Ya rie ihe du kwa mb aftere O siri na ndi nwuru anwu bilie. 42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama nke ahụ ọ bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. 43 Ọ bụ ya ka ndị amụma niile na -agbara na onye ọ bụla nke kwere na ya na -enweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. "
Ọlụ Ndị Ozi 10: 44-45 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), wụkwasịrị onyinye nke Mmụọ Nsọ ọbụna ndị mba ọzọ
44 Mgbe Pita ka na -ekwu ihe ndị a, mmụọ nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ. 45 Ọ tụkwara ndị kwere ekwe n'anya n'etiti ndị e biri úgwù, ndị soro Pita bịa, n'ihi na a wụkwasịrị onyinye nke Mmụọ Nsọ ọbụna na ndị mba ọzọ.
Ọrụ 11: 15-18 (NIV) Wasnye ka m bụ na m nwere ike iguzo n'ụzọ Chineke
15 Ka m malitere ikwu okwu, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ha dịka ọ dakwasịrị anyị na mbido. 16 M'we cheta okwu Onye -nwe -ayi, otú Ọ siri, Jọn ji miri me baptism, ma ag youji Mọ Nsọ me unu baptism. 17 Ọ bụrụkwa na Chineke nyere ha otu onyinye ahụ dịka o nyere anyị mgbe anyị kwere n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye m bụ ka m nwee ike guzo n'ụzọ Chineke? " 18 Mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha agbachi nkịtị. Ha we nye Chineke otuto, si,Ya mere, Chineke nyekwara ndị mba ọzọ nchegharị nke na -eduba na ndụ. "
Ọrụ 13: 37-40 (NIV) nwere onwe gị pụọ n'ihe niile nke iwu Moses na -apụghị ịtọhapụ gị n'ime ya
37 ma onye ahụ Chineke mere ka ọ ghara ịhụ ire ure. 38 Ya mere, maranụ, ụmụnna m, na a na -ekwusara unu mgbaghara mmehie site na nwoke a, 39 na site na ya onye ọ bụla nke kwere nwere onwe ya pụọ ​​n'ihe niile nke iwu Mozis na -apụghị ịtọhapụ ya. 40
Ọlụ Ndị Ozi 13: 45-46 (Okwu nke Chineke) Ebe ọ bụ na ị tụfuru ya, anyị na-agakwuru ndị mba ọzọ.
45 Ma mgbe ndị Juu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ekworo juru ha obi wee malite imegide ihe Pọl kwuru, na -ekwujọ ya. 46 Ma Pọl na Banabas ji nkwuwa okwu kwuo, sị,Ọ dị mkpa ka eburu ụzọ gwa unu okwu Chineke. Ebe unu tụfuru ya wee kpee onwe unu ikpe na -erughị eru maka ndụ ebighi ebi, lee, anyị na -agakwuru ndị mba ọzọ.
Ọrụ 15: 1-11 (NIV) Gịnị mere i ji na -atụkwasị yoke n'olu nke ma nna anyị ma anyị enweghị ike iburu?
1 Ma ụfọdụ ndị mmadụ si na Judia gbadata wee na -akuziri ụmụnna, “Ọ bụrụ na e bighị unu úgwù dịka omenala Moses siri dị, a gaghị azọpụta unu.” 2 Ma mgbe Pọl na Banabas na -enweghị obere nghọtahie na arụmụka n'etiti ha, A họpụtara Pọl na Banabas na ụfọdụ ndị ọzọ ka ha gaa Jerusalem na ndịozi na ndị okenye banyere ajụjụ a. 3 Ya mere, ebe ọgbakọ zitere ha na njem ha, ha gabigara ma Finisia ma Sameria, na -akọwa nke ọma mgbanwe nke ndị mba ọzọ, wee wetara ụmụnna niile ọ joyụ dị ukwuu. 4 Mgbe ha rutere Jerusalem, ọgbakọ na ndị ozi na ndị okenye nabatara ha, ha kwukwara ihe niile Chineke mere ha. 5 Ma ụfọdụ ndị kwere ekwe ndị so na ndị otu ndị Farisii biliri sị, “Ọ dị mkpa ka e bie ha ugwu ma nye ha iwu ka ha debe iwu Moses.. " 6 Ndịozi na ndị okenye zukọtara ịtụle okwu a. 7 Ma mgbe enwere nnukwu arụmụka, Pita biliri wee sị ha, “Ụmụnna m, unu maara na na mbụ, Chineke mere nhọrọ n'etiti unu, ka ndị mba ọzọ nụ site n'okwu m nke ozi ọma wee kwere.. 8 Chineke, onye maara obi, gbakwara ha ama, site n'inye ha Mmụọ Nsọ dịka o nyekwara anyị, 9 ma o nweghi ihe dị iche n'etiti anyị na ha, ebe o jiri okwukwe mee ka obi ha dị ọcha. 10 Ma ub thereforeu a, gini mere unu nānwa Chineke site n'itinye yoke n'olu ndi n disciplesso uzọ nke nna -ayi -hà ma ayi onwe -ayi apughi ib bearru?? 11 Mana anyị kwenyere na a ga -azọpụta anyị site na amara nke Onyenwe anyị Jizọs, dịkwa ka ha ga -azọpụta. ”
Ọrụ 15: 19-20 (NIV) Anyị ekwesịghị inye ndị mba ọzọ na -echigharịkwuru Chineke nsogbu
19 Ya mere ikpe m bụ nke ahụ anyị ekwesịghị inye ndị mba ọzọ na -echigharịkwuru Chineke nsogbu, 20 kama ha kwesịrị idegara ha akwụkwọ ka ha zere ihe arụsị rụrụ arụ, na ịkwa iko, na ihe anyagburu anyagbu, na ọbara.
Ọrụ 15: 28-29 (NIV) Ọ bụrụ na unu edebe onwe unu na ihe ndị a, ọ ga -adịrị unu mma
28 N'ihi na ọ dị mma n'anya Mmụọ Nsọ na anyị ka anyị ghara ịtụkwasị gị ibu arọ karịa ihe ndị a: 29 ka unu zere ihe achụrụ n'àjà nye arụsị, na ọbara, na ihe a nyagburu anyagbu, na ịkwa iko. Ọ bụrụ na unu edebe onwe unu na ihe ndị a, ọ ga -adịrị unu mma. Daalụ. ”
Ọlụ Ndị Ozi 21: 18-28 (ESV), Ị na-akuziri ndị Juu niile ịhapụ Moses
18 N'echi ya, Pọl so anyị gakwuru Jems, ndị okenye niile nọkwa ya. 19 Mgbe o kelechara ha, ọ kọọrọ otu onye ihe Chineke mere n'etiti ndị mba ọzọ site n'ozi ya. 20 Mb whene ha nuru ya, ha we nye Chineke otuto. Ha wee sị ya, "Ị hụrụ, nwanne m, puku kwuru puku ndị Juu kwere ekwe. Ha niile na -anụ ọkụ n'obi maka iwu, 21 a gwawokwa ha banyere gị na ị na -akụziri ndị Juu niile nọ n'etiti ndị mba ọzọ ịhapụ Moses, na -agwa ha ka ha ghara ibi ụmụ ha úgwù ma ọ bụ na -eje ije dị ka omenala anyị si dị.. 22 Gịnịzi ka a ga -eme? Ha ga -anụrịrị na ị bịara. 23 Ya mere mee ihe anyị na -agwa gị. Anyị nwere ụmụ nwoke anọ kweworo nkwa; 24 Kpọrọ ndị ikom a, soro ha mee onwe gị ka ha dị ọcha, kwụọkwa ụgwọ mmefu ha, ka ha wee kpụọ isi ha. Ya mere mmadụ niile ga -amara na ọ dịghị ihe dị n'ime ihe a gwara ha banyere gị, kama na gị onwe gị na -ebikwa idebe iwu. 25 Ma ndị mba ọzọ kwere, anyị zitere akwụkwọ ozi na mkpebi ikpe anyị ka ha zere ihe a chụrụ n'àjà nye arụsị, na ọbara, na ihe nyagburu anyagbu, na ịkwa iko.. " 26 Mgbe ahụ, Pọl kpọọrọ ndị ikom ahụ, n'echi ya, ya na ha wee mee onwe ya ka ọ dị ọcha, wee banye n'ụlọ nsọ, na -ekwupụta mgbe ụbọchị ime ka ọ dị ọcha ga -ezu, nyekwa onye ọ bụla n'ime ha onyinye. 27 Mgbe ụbọchị asaa ahụ gwụchara, ndị Juu si Eshia hụrụ ya n'ụlọ nsọ wee kpalie ìgwè mmadụ ahụ dum wee bikwasị ya aka, 28 na -eti mkpu, "Ndị ikom Izrel, nyere aka! Nke a bụ nwoke na -akụziri onye ọ bụla ebe niile megide ndị mmadụ na iwu na ebe a.
Pọl baara ndị na -ahapụ Chineke azụ ma na -atụgharị na ozioma dị iche na -agwa ndị kwere ekwe ka ha gbasoo iwu Mozis. (Gal 1: 6-7) Ọ bụ ezie na Pọl bụbu onye Juu na-anụ ọkụ n'obi n'ịgbaso ọdịnala nna nna ya na ịbụ onye tozuru oke n'okpukpe ndị Juu karịa ndị ọgbọ ya, ekpughere amara Chineke nye ya n'ime nwa ya ka o wee kwusaa Jizọs. n'etiti ndị Jentaịl. (Gal 1: 14-16) Ka ozi Pọl na-aga n'ihu, ụmụnna ụgha batara na chọọchị dị iche iche, ndị batara iledo nnwere onwe ha nwere na Kraịst Jizọs, ka ha wee kpọghachite ha n'ohu. (Ndị Galetia 2: 4) Nye ndị ahụ dị ka ndị nwere mmetụta, Pọl ekweghị ido onwe ya n'okpuru ọbụlagodi oge, ka e wee chekwaa eziokwu nke ozi ọma nye ndị ọ na -ejere ozi. (Gal 2: 5-6) O megidere Sifas n'ihu ya n'ihi na o mehiere. (Ndị Galetia 2:11) Nke a bụ n'ihi na mgbe ya na ndị mba ọzọ riri nri, ọ lara azụ wee kewapụ onwe ya na ha, na -atụ egwu oriri ibi ugwu. (Gal 2:12) Omume onye Juu nke biri ndụ dị ka onye Jentaịl ịmanye ndị Jentaịl ibi ndụ dị ka ndị Juu esoghị n'eziokwu nke ozi ọma. (Ndị Galetia 2: 13-14)
Ndị ahụ kwere ekwe bụ ndị Juu site n'ọmụmụ amatala na a gụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu kama site na okwukwe na Jizọs Kraịst. (Gal 2:15) They kwere na Kraịst Jizọs, ka ewe gua ya n'onye ezi omume site n'okwukwe na Kraist, ọ bughi kwa n'ọlu iwu, n'ihi na ọ dighi onye ọ bula gēsite n'ọlu nke iwu gu n'onye ezi omume. ( Gal 2:16 ) Ọ ga-abụ mmebi iwu Pọl iwughachi ihe ọ kwaturu kemgbe ọ nwụrụ n’iwu, ka o wee dị ndụ nye Chineke. (Gal 2:18-19) Akpọgidere ya na Kraịst n'obe - ibi ndụ ya n'anụ ahụ site n'okwukwe na Ọkpara Chineke. (Gal 2:20) Pọl jụrụ imebi amara Chineke site n'ikwusa iwu, n'ihi na ọ bụrụ na ezi omume sitere n'iwu, Kraịst nwụrụ n'efu. (Ndị Gal 2:21)
Ikwusa ọrụ iwu bụ ihe nzuzu nye onye na -agba ama maka Jizọs Kraịst onye a kpọgburu maka anyị. (Ndị Galetia 3: 1-2) N'ihi na anyị na-anata Mmụọ ahụ ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu, kama site na ịnụ ya na okwukwe. (Gal 3: 2) Ọ dị nzuzu, na mgbe anyị bidoro site na mmụọ nsọ, anyị ga -agbasi mbọ ike ịchụso anụ ahụ zuru oke. (Gal 3: 3-4) Onye na-enye mmụọ nsọ ma na-arụ ọrụ ebube na-eme nke a site na iji okwukwe nụrụ ya ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu. (Gal 3: 5-6) Ndị niile tụkwasịrị ọrụ nke iwu nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ; n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye anābu ọnu ka ọ bu, bú onye nādighi -erube isi n'ihe nile edeworo n'akwukwọ iwu, me ha. (Gal 3:10) Ọ dịghị onye ọ bụla a na -agụ n'onye ezi omume n'ihu Chineke kama site n'okwukwe anyị na -enweta ezi omume. (Gal 3:11) Idebe iwu anaghị arụ ọrụ n'okwukwe kama ọ bụ ụzọ ndụ nke iwu kwadoro nke ndị na -agbaso ya. (Ndị Galetia 3:12) Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu, ka ọ bụrụ na Kraịst Jizọs ka ngọzi Abraham wee rute ndị mba ọzọ na mmụọ nke e kwere na nkwa ga -enweta site n'okwukwe.
Akwụkwọ -nsọ tụrụ ihe niile mkpọrọ n'okpuru mmehie, ka e wee nye ndị kwere ekwe nkwa ahụ site n'okwukwe n'ime Jizọs. (Gal 3:22) Tupu okwukwe abịa, a na -ejide ha dị ka ndị eji eji n'okpuru iwu, tụọ ha mkpọrọ ruo mgbe ekpughere okwukwe na -abịanụ. (Gal 3:23) Iwu ahụ bụ onye nche ruo mgbe Kraịst bịara, na nke ọzọ na izi ezi ga -abịa site n'okwukwe. (Gal 3: 24) Ndị na -anọghịzi n'okpuru onye nlekọta ka ndị ahụ sitere n'okwukwe n'ime Jizọs bụ ụmụ Chineke ugbu a. (Gal 3: 25-26) Ka ọtụtụ ndị mere baptizim n'ime Kraịst eyirila Kraịst ma anyị niile bụ otu n'ime ya-enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, ma ọ nweghị ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, ọ nweghị nwoke na nwanyị. (Ndị Galeshia 3: 27-28). Oburu na ayi bu nke Kraist, ayi bu nkpuru Abraham, buru kwa ndi nketa nke nkwa ahu. (Gal 3:29) Ugbu a anyị amatala Chineke ma bụrụkwa onye Chineke mara, kedu ka anyị ga -esi laghachi azụ wee bụrụ ndị ohu ọzọ maka isi mmalite nke ụwa na -adịghị ike na nke na -abaghị uru? (Gal 4: 8-9) Ndọgbu nke Oziọma na-arụ bụ ihe efu ma ọ bụrụ na anyị alaghachi azụ ịhụ ụbọchị na ọnwa na oge na afọ. (Gal 4: 10-11) N'iburu n'uche na ozi dị n'okpuru iwu na-arụtụ aka n'ọgbụgba ndụ nnwere onwe ka mma site na Kraịst, na-emegide ọgbụgba ndụ ịgba ohu, ọ na-agbagwoju anya na ụfọdụ ndị kwere ekwe ga-achọ ịnọ n'okpuru iwu. (Ndị Galeshia 4: 20-26)
Ihe niile Chineke kere dị mma, ọ dịghịkwa ihe a ga-ajụ ma ọ bụrụ na e jiri ekele nara ya, n'ihi na e doro ya nsọ site n'okwu Chineke na ekpere. (1 Tim. 4:4) Ka onye na-eri ihe ghara ileda onye na-eri ihe anya, ka onye na-ajụkwa oyi ghara ikpe onye na-eri ihe n'ikpe, n'ihi na Chineke anabatawo ya. (Ndị Rom 14:1-3) Ị bụ onye ga-ekpe ohu nke ọzọ ikpe? Ọ bu kwa n'iru onye-nwe-ya ka ọ nēguzo ma-ọbu da: ewe guzo ya: n'ihi na Jehova puru ime ka o guzo. (Rom 14:4) Ya mere, ka anyị ghara ikpe ibe anyị ikpe ọzọ, kama kpebie na anyị agaghị etinye ihe ịsụ ngọngọ ma ọ bụ ihe mgbochi n'ụzọ nwanna. (Rom 14:13) Amaara m ma kweta n'ime Onyenwe anyị Jizọs na ọ dịghị ihe na-adịghị ọcha n'onwe ya, kama ọ bụụrụ onye ọ bụla nke na-eche na ọ dịghị ọcha. (Ndị Rom 14:14) Ala-eze Chineke abụghị okwu iri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ kama ọ bụ nke ezi omume na udo na ọṅụ nke Mmụọ Nsọ. (Rom 14:17) Onye ọ bụla na-ejere Kraịst ozi otú ahụ bụ onye Chineke na-anara nke ọma, ndị mmadụ na-anabatakwa ya—Ya mere, ka anyị na-achụso ihe na-eme ka udo dị na ibe anyị na-ewuli elu. (Ndị Rom 14:18)
Ọ bụrụ na ị nabata ibi úgwù, ị ga -edobe iwu niile, Kraịst agaghị abara gị uru. (Ndị Galetia 5: 2-3) Unu ndị ga-abụ ndị ezi omume site n'iwu adapụla amara, ebe e kewapụrụ unu na Kraịst. (Ndị Galetia 5: 4) N'ihi na site n'okwukwe site na Mmụọ, anyị na -echesi olileanya anyị ike na onye mere anyị ka anyị bụrụ ndị ezi omume. (Gal 5: 5) N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs ọ bụghị ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù abụghị ihe ọ bụla, kama ọ bụ naanị okwukwe na -arụ ọrụ site n'ịhụnanya. (Ndị Galetia 5: 6) Lezienụ anya maka ndị na -emebi anụ ahụ, kama ọ bụ ndị ibi úgwù ka ha na -efe ofufe site na mmụọ nke Chineke na -atụkwasịghị obi n'anụ ahụ. (Ndị Filipaị 3: 2-3) Ka onye ọ bụla ghara ikpe gị ikpe n'ihe banyere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ma ọ bụ n'ihe gbasara ememme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike. (Kọl 2:16) Ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst. (Ndị Kọlọsi 2:17) Anyị nwere onwe anyị n'ihe niile dị otu a, anyị anọghị n'okpuru iwu. (1 Ndị Kọrịnt 9: 19-20) Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ibi na mpụga iwu, anyị abụghị ndị mmebi iwu n'ihu Chineke kama n'okpuru iwu Kraịst. (1 Ndị Kọrịnt 9:21) Ọ bụrụ na mmụọ nsọ na -edu gị, ị nọghị n'okpuru iwu. (Ndị Galetia 5:18)
(Ndị Galetia 1: 6-7) O juru m anya na ị na -eme ngwa ngwa na -atụgharị na ozi -ọma dị iche
6 Ọ na -eju m anya na unu na -ahapụ onye kpọrọ unu n'amara Kraịst ngwa ngwa wee na -alaghachi n'ozi ọma dị iche.- 7 ọbụghị na enwere onye ọzọ, mana enwere ụfọdụ ndị na -enye gị nsogbu ma na -achọ imebi ozi ọma nke Kraịst.
(Ndị Galetia 1: 14-16) Enwere m oke ịnụ ọkụ n'obi maka ọdịnala ndị nna m
14 na Anọ m na -aga n'ihu n'okpukpe ndị Juu karịa ọtụtụ ọgbọ m n'etiti ndị m, enwere m oke ịnụ ọkụ n'obi maka ọdịnala ndị nna m.. 15 Ma mgbe onye ahụ nke kewapụrụ m iche tupu amụrụ m, onye kpọrọ m site na amara ya, 16 ọ masịrị m ikpughere m Ọkpara ya, ka m wee kwusaa ya n'etiti ndị mba ọzọ,
(Ndị Galetia 2: 4-6) Gbabatara na inyocha nnwere onwe anyị nke anyị nwere n'ime Kraịst Jizọs
4 Ma n'ihi ụmụnna ụgha na -akpọbata na nzuzo - ndị zoro wee ledo nnwere onwe anyị nke anyị nwere n'ime Kraịst Jizọs, ka ha wee kpọbata anyị n'ịbụ ohu- 5 nye ha, anyị ekweghị ka anyị rube isi ọbụna ruo nwa oge, ka e wee chekwaa eziokwu nke ozi ọma. 6 Sitekwa na ndị ahụ yiri ka ha na -enwe mmetụta (ihe ha bụ enweghị ihe ọ bụla nye m; Chineke anaghị ele mmadụ anya n'ihu) -ndị ahụ, ka m na -ekwu, ndị yiri ka ọ na -enwe mmetụta, agbakwụnyeghị m ihe ọ bụla.
(Ndị Galetia 2: 11-14) Omume ha adabaghị n'eziokwu nke ozi -ọma
11 ma mgbe Sifas bịarutere Antiọk, emegidere m ya ihu ya, n'ihi na a mara ya ikpe. 12 N'ihi na tutu ndikom ufọdu esi na Jemes bia, ya na ndi mba ọzọ n wasri ihe; ma mgbe ha bịara, ọ lara azụ wee kewapụ onwe ya, na -atụ egwu ndị otu ibi úgwù. 13 Ma ndi -Ju fọduru soro ya me ihe iru -abua, nke mere ka ihu -abua ha we meb evenu kwa Banabas. 14 Ma mgbe Ahụrụ m na omume ha adabaghị n'eziokwu nke ozi ọma, agwara m Sifas n'ihu ha niile, "Ọ bụrụ na gị, ọ bụrụ na ị bụ onye Juu, na -ebi ndụ dị ka onye mba ọzọ ọ bụghị dị ka onye Juu, olee otu ị ga -esi manye ndị mba ọzọ ibi ndụ. dị ka ndị Juu? "
(Ndị Galetia 2: 15-21) Ndụ m na -ebi ugbu a n'anụ ahụ m na -ebi site n'okwukwe m nwere n'ebe Ọkpara Chineke nọ
15 Anyị onwe anyị bụ ndị Juu site n'ọmụmụ, anyị abụghị ndị mmehie nke ndị Jentaịl; 16 ma anyị matara na ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu ka a gụrụ mmadụ n'onye ezi omume kama site na okwukwe na Jizọs Kraịst, otu a anyị onwe anyị ekwerewokwa na Kraịst Jizọs, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume site na okwukwe na Kraịst ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu, n'ihi na ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu ọ dịghị onye a ga -agụ n'onye ezi omume. 17 Ma ọ bụrụ na, n'ime mbọ anyị na -agba ka anyị bụrụ ndị ezi omume n'ime Kraịst, a hụkwara anyị onwe anyị dị ka ndị mmehie, mgbe ahụ Kraịst ọ bụ ohu mmehie? Ọ dịghị ma ọlị! 18 n'ihi na ọ bụrụ na m wughachi ihe m kwadara, m na -egosi na m bụ onye mmebi iwu. 19 N'ihi na ọ bụ site n'iwu ka m nwụrụ nye iwu, ka m wee dị ndụ nye Chineke. 20 A kpọgidere m na Kraịst n'obe. Ọ bụghịzi m dị ndụ ọzọ, kama ọ bụ Kraịst nke bi n'ime m. Na ndụ m na -ebi ugbu a n'anụ ahụ m na -ebi site n'okwukwe m nwere n'ebe Ọkpara Chineke nọ, onye hụrụ m n'anya ma nyefee onwe ya maka m. 21 Adịghị m emebi amara Chineke, n'ihi na ọ bụrụ na ezi omume sitere na iwu, yabụ na Kraịst nwụrụ n'efu.
(Ndị Galetia 3: 1-6) Ebe unu bidola site na Mmụọ, ugbu a emela ka unu zuo oke site n'anụ ahụ
1 Ndị Galetia nzuzu! Kedu onye mere gi afa? Ọ bụ n'ihu anya gị ka a kọwara Jizọs Kraịst dịka onye a kpọgidere n'obe. 2 Ka m jụọ gị naanị nke a: Ị natara mmụọ site n'ọrụ nke iwu ma ọ bụ site na ịnụrụ okwukwe? 3 Ị bụ onye nzuzu? Ebe unu bidola site na Mmụọ, ị na -emezu ugbu a n'anụ ahụ? 4 Ị tara ahụhụ nke ukwuu ọtụtụ ahụhụ n'efu - ọ bụrụ n'ezie na ọ bụ n'efu? 5 Onye na -enye unu Mmụọ Nsọ ma na -arụ ọrụ ebube n'etiti unu ọ na -eme ya site n'ọrụ nke iwu, ma ọ bụ site na ịnụrụ okwukwe- 6 dị nnọọ ka Abraham “kwere Chineke, e wee gụọrọ ya nke ahụ dị ka ezi omume”?
Ndị Galetia 3: 10-14 (ESV), Ndị niile na-adabere n'ọrụ iwu dị n'okpuru ọbụbụ ọnụ
10 n'ihi na ndị niile na -adabere n'ọrụ iwu dị n'okpuru ọbụbụ ọnụ; n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ,Onye anābu ọnu ka ọ bu, bú onye n notmeghi ihe nile edeworo n'akwukwọ iwu, me ya. " 11 Ugbu a ọ pụtara ìhè na ọ dịghị onye ọ bụla a na -agụ n'onye ezi omume n'ihu Chineke, n'ihi na "Onye ezi omume ga -adị ndụ site n'okwukwe." 12 Mana iwu esiteghị n'okwukwe, kama "Onye na -eme ha ga -esi na ya dị ndụ." 13 Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ anyị ọbụbụ ọnụ- n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, "Onye a bụrụ ọnụ ka onye ọ bụla a kwụwara n'elu osisi bụ" 14 ka ngọzi Abraham wee rute ndị mba ọzọ n'ime Kraịst Jizọs. ka ayi we were okwukwe nweta Mọ nke ekwere na nkwa.
(Ndị Galetia 3: 22-29) Ugbu a okwukwe abịala, anyị anọkwaghị n'okpuru onye nlekọta
22 Ma Akwụkwọ Nsọ jidere ihe niile n'okpuru mmehie, ka e wee nye ndị kwere ekwe nkwa ahụ site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst. 23 Ma tupu okwukwe abịarute, anyị bụ ndị a dọtara n'agha n'okpuru iwu, nọkwa n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe a ga -ekpughe okwukwe na -abịanụ. 24 Ya mere, iwu bụ onye nche anyị ruo mgbe Kraịst bịara, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume site n'okwukwe. 25 Mana ugbu a okwukwe abịala, anyị anọkwaghị n'okpuru onye nlekọta, 26 n'ihi na nime Kraist Jisus unu nile bu umu Chineke, site n'okwukwe. 27 N'ihi na ka unu ra, bú ndi emere baptism iba nime Kraist, unu yikwasiri Kraist. 28 E nweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghị ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, ọ nweghị nwoke na nwanyị, n’ihi na unu niile bụ otu onye n’ime Kraịst Jizọs. 29 Ọ bụrụkwa na unu bụ nke Kraịst, mgbe ahụ unu bụ ụmụ Abraham, ndị nketa dị ka nkwa si dị.
Ndị Galetia 4: 8-11 (ESV), ana m atụ egwu na enwere m ike ịdọgbu onwe m n'ọrụ n'efu
8 Na mbụ, mgbe unu na -amaghị Chineke, ị bụ ohu nye ndị na -esiteghị n'okike abụghị chi. 9 Ma ugbu a unu amatala Chineke, ma ọ bụ karịa ka Chineke mara unu, kedu ka ị ga -esi laghachi azụ n'ụkpụrụ elementrị nke adịghị ike na nke na -abaghị uru nke ụwa, ndị ị chọrọ ịbụ ndị ohu ya ọzọ? 10 Ị na -edebe ụbọchị na ọnwa na oge na afọ! 11 Ụjọ na -atụ m na m nwere ike ịdọgbu onwe m n'ọrụ n'ime gị n'efu.
(Ndị Galetia 4: 20-21) Enwere m mgbagwoju anya banyere gị
20 Ọ dị m ka ya bụrụ na mụ na gị nọ ugbu a wee gbanwee ụda m, n'ihi na enwere m mgbagwoju anya banyere gị. 21 Gwa m, unu ndị chọrọ ịnọ n'okpuru iwu, ùnu adịghị ege ntị n'iwu? 22
1 Timoti 4: 4-5 (ESV), Ọ dịghị ihe ọ bụla a ga-ajụ ma ọ bụrụ na ejiri ekele na-anabata ya
N'ihi na ihe niile Chineke kere dị mma, ọ dịghịkwa ihe a ga -ajụ ma ọ bụrụ na ejiri ekele na -anabata ya, 5 n'ihi na edoro ya nsọ site n'okwu Chineke na ekpere.
Ndị Rom 14: 1-4 Ka onye na -adịghị ahapụ ikpe onye ahụ na -eri ikpe
1 Ma onye okwukwe ya na -adịghị ike, nabatanụ ya, ma ọ bụghị ịrụ ụka. 2 Otu onye kwenyere na ya nwere ike iri ihe ọ bụla, ebe onye na -adịghị ike na -eri naanị akwụkwọ nri. 3 Ka onye na -eri ihe ghara ileda onye na -adịghị eri ihe anya, ka onye na -eri ihe gharakwa ikpe onye na -eri ikpe n'ihi na Chineke anabatawo ya.. 4 Arenye ka ị bụ ikpe onye na -ejere onye ọzọ ozi? Ọ bụ n'ihu nna ya ukwu ka ọ na -eguzo ma ọ bụ daa. A ga -akwadokwa ya, n'ihi na Onyenwe anyị nwere ike ime ka o guzoro.
Ndị Rom 14: 13-18 Amaara m ma kwenyesie ike n'ime Onyenwe anyị Jizọs na ọ dịghị ihe na -adịghị ọcha n'onwe ya
13 Ya mere, ka anyị ghara ikpekwa ibe anyị ikpe ọzọ, kama kpebie na ị gaghị etinye ihe ịsụ ngọngọ ma ọ bụ ihe mgbochi n'ụzọ nwanna nwoke. 14 Amaara m ma kwenyesie ike n'ime Onyenwe anyị Jizọs na ọ dịghị ihe na -adịghị ọcha n'onwe ya, ma ọ bụ ihe na -adịghị ọcha nye onye ọ bụla chere na ọ bụ ihe na -adịghị ọcha. 15 N'ihi na ọ bụrụ na ihe ị na -eri na -ewute nwanne gị, ị naghịzi eje ije n'ịhụnanya. Site n'ihe ị na -eri, emebila onye ahụ Kraịst nwụrụ maka ya. 16 Ya mere, ekwela ka ekwulu ihe ị na -ewere dị ka ihe ọma. 17 n'ihi na ala eze Chineke abughi ihe oriri na ị drinkingụ ihe ọ butụ butụ kama ọ bụ ezi omume na udo na ọ joyụ n'ime Mmụọ Nsọ. 18 Onye ọ bụla nke na -ejere Kraịst ozi bụ onye Chineke na -anabata nke ọma, nke mmadụ nabatara. 19 Yabụ mgbe ahụ ka anyị chụsoo ihe na -eweta udo na maka iwulite ibe anyị.
(Ndị Galetia 5: 2-6) N'ime Kraịst Jizọs, ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù adịghị mkpa
2 Lee: mụ onwe m, Paul, na -agwa gị nke ahụ ọ bụrụ na unu anabata ibi úgwù, Kraịst agaghị abara unu uru. 3 Ana m agba akaebe ọzọ nye onye ọ bụla nke na -anabata ibi úgwù na ọ dị mkpa idebe iwu niile. 4 E kewapụrụ gị na Kraịst, gị onye a ga -agụ n'onye ezi omume site n'iwu; i si na amara pụọ. 5 N'ihi na site na Mmụọ, site n'okwukwe, anyị onwe anyị na -echere olileanya nke ezi omume. 6 N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs ọ bụghị ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù abụghị ihe ọ bụla, kama ọ bụ naanị okwukwe na -arụ ọrụ site n'ịhụnanya.
Ndị Galetia 5: 18 (NIV) ọ bụrụ na Mmụọ Nsọ na -edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu
ma ọ bụrụ na Mmụọ Nsọ na -edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu
(Ndị Filipaị 3: 2-3) Lezienụ anya maka ndị na -emebi anụ ahụ
2 Lezienụ anya maka nkịta, lezienụ anya maka ndị na -eme ihe ọjọọ, lezienụ anya maka ndị na -emebi anụ ahụ. 3 N'ihi na anyị bụ ndị e biri úgwù, ndị na -efe ofufe site na mmụọ nke Chineke na ebube n'ime Kraịst Jizọs ma ghara ịtụkwasị obi n'anụ ahụ:
Ndị Kọlọsi 2: 16-17 Ndị a bụ onyinyo nke ihe ndị na -abịa
16 Ya mere ekwela ka onye ọ bụla kpee gị ikpe n'ihe banyere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ma ọ bụ n'ihe gbasara ememme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike. 17 Ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst.
1 Ndị Kọrịnt 9: 19-21 (ESV), Ọ bụghị n'okpuru iwu-n'okpuru iwu Kraịst
A na-ekwusa mgbaghara mmehie site n’aha Jizọs, na site n’aka ya ka a napụrụ onye ọ bụla nke kwere n’ihe niile nke a na-enweghị ike ịtọhapụ ha site n’iwu Mozis. ( Ọrụ 13:38-39 ) Site n’ọnụ Pita, Chineke mere nhọrọ ka ndị mba ọzọ nụ okwu nke ozi ọma ma kwere. ( Ọrụ 15:7 ) Chineke, bụ́ onye maara obi, gbara àmà banyere nzọpụta ha, site n’inye ha Mmụọ Nsọ dị nnọọ ka o meere ndị Juu, o meghịkwa ọdịiche dị n’etiti ndị Jentaịl na ndị Juu, ebe o ji okwukwe mee ka obi ha dị ọcha. ( Ọrụ 15:8-9 ) Ọ dịghị ihe mere a ga-eji nwaa Chineke ọnwụnwa site n’ịtụkwasị yoke n’olu nke ndị na-eso ụzọ ya bụ́ nke ndị Juu na-apụghị iburu. ( Ọrụ 15:10 ) A ga-azọpụta ma ndị Juu ma ndị Jentaịl site n’amara nke Onyenwe anyị Jizọs. (Ọrụ 15:11). Ya mere ayi kwere na Kraist Jisus, ka ewe gu ha n'onye ezi omume site n'okwukwe nime Kraist, ọ bughi kwa n'ọlu nke iwu, n'ihi na ọ dighi onye ọ bula agēsite n'ọlu nke iwu gu onye ezi omume. (Ndị Gal 2:16)
Ayi gānwu n'iwu, ka ayi we di ndu nye Chineke. (Gal 2:19) Ọ bụrụ na akpọgidewo anyị na Kraịst n’obe, anyị adịghị ebi ndụ ọzọ site n’anụ ahụ́, ma Kraịst bi n’ime anyị ka anyị na-ebi site n’okwukwe n’Ọkpara Chineke. (Gal 2:20) Anyị ekwesịghị imebi amara Chineke site n'ịgbalị inweta ezi omume site n'iwu, ma ọ bụghị ya, Kraịst nwụrụ n'efu. (Gal 2:21) Anyị na-enweta mmụọ nsọ site n'ịnụ ihe na okwukwe, ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu. (Gal 3:2) Ọ bụ nnọọ ihe nzuzu, mgbe e mechachara anyị site na mmụọ nsọ, anyị na-alaghachi n'ịbụ ndị e mere ka ha zuo okè site n'ọrụ nke anụ ahụ. (Gal 3:3) Onye na-enye anyị mmụọ nsọ ma na-arụ ọrụ ebube n'etiti anyị na-eme ya site n'ịnụ ihe n'okwukwe, ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu. (Gal 3:5) Ihe niile dị ka mfu ma e jiri ya tụnyere uru na-enweghị atụ nke ịmara Kraịst Jizọs. (Fil 3:7) Ihe ndị ọzọ ekwesịrị ka agụọ dị ka ihe mkpofu iji nweta Kraịst wee hụ ya n'ime ya, ọ bụghị na anyị enweghị ezi omume nke anyị onwe anyị nke sitere n'iwu, kama nke sitere n'okwukwe na Kraịst - ezi omume sitere na Chineke. nke ahụ dabere n'okwukwe. ( Ndị Filipaị 3: 8-9 )
O doro anya na ọ dịghị onye ọ bụla a na -agụ n'onye ezi omume n'ihu Chineke, n'ihi na "Onye ezi omume ga -adị ndụ site n'okwukwe." (Gal 3:11) Mana iwu esiteghị n'okwukwe, kama ọ bụ ụzọ ndụ nke iwu kwadoro. (Ndị Galetia 3:12) Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ ọbụbụ ọnụ nye anyị - ka ngọzi nke Abraham wee bịakwute ndị mba ọzọ ka anyị wee nata okwukwe e kwere na nkwa. (Gal 3: 13-14) Site n'ọrụ nke iwu ọ dịghị mmadụ ọ bụla a ga-agụ n'onye ezi omume, ebe ọ bụ na iwu na-esite n'ịmara mmehie. (Ndị Rom 3:20) Ma ugbu a, e gosipụtala ezi omume Chineke na -anọghị n'iwu, ezi omume Chineke sitere na okwukwe na Jizọs Kraịst maka ndị niile kwere. (Ndị Rom 3: 21-22) Ọ dịghị ihe dị iche n'etiti ndị Juu na ndị mba ọzọ: mmadụ niile emehiela, ha adịghị erukwa otuto Chineke, a na-esitekwa n'amara ya guo ha n'onye ezi omume dịka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs, onye Chineke tinye n'ihu ya ka ọ bụrụ ihe ịjụrụ ya obi site n'ọbara ya, ka okwukwe wee nata ya. (Ndị Rom 3: 22-25)
Ọrụ 13: 38-39 (ESV), Fị ga -esi n'ihe ọ bụla nke iwu Mozis napụtaghị gị pụọ na ya
38 Ya mere, maranụ, ụmụnna m, na a na -ekwusara unu mgbaghara mmehie site na nwoke a, 39 na site n'aka ya onye ọ bụla kwere ekwe nwere onwe ya pụọ ​​n'ihe niile iwu Mozis na -enweghị ike ịtọhapụ ya.
Ọrụ 15: 7-11 (NIV) Ịtụkwasị yoke n'olu nke ndị nna anyị ma ọ bụ anyị enweghị ike ibuli
7 Ma mgbe enwere nnukwu arụmụka, Pita biliri gwa ha, “Ụmụnna m, unu maara na n'oge mbụ Chineke mere nhọrọ n'etiti unu, ka ndị mba ọzọ wee nụ site n'okwu m nke ozi ọma wee kwere. 8 Chineke, onye maara obi, gbakwara ha ama, site n'inye ha Mmụọ Nsọ dịka o nyekwara anyị. 9 ma o nweghi ihe dị iche n'etiti anyị na ha, ebe o jiri okwukwe mee ka obi ha dị ọcha. 10 Ya mere, ugbu a, gịnị mere ị na -anwale Chineke site n'itinye yoke n'olu ndị na -eso ụzọ nke nna anyị na anyị enweghị ike ịnagide?? 11 Mana anyị kwenyere na a ga -azọpụta anyị site na amara nke Onyenwe anyị Jizọs, dịkwa ka ha ga -azọpụta. ”
(Ndị Galetia 2: 15-16) Site n'ọrụ nke iwu ọ dịghị onye a ga -agụ n'onye ezi omume
15 Anyị onwe anyị bụ ndị Juu site n'ọmụmụ, anyị abụghị ndị mmehie nke ndị Jentaịl; 16 ma anyị matara na a gụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu kama site na okwukwe na Jizọs Kraịst, yabụ anyị onwe anyị ekwerewokwa na Jizọs Kraịst, ka e wee kpọọ anyị ndị ezi omume site n'okwukwe na Kraịst ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu, n'ihi na ọ bụ site n'ọrụ nke iwu ọ dịghị onye a ga -agụ n'onye ezi omume.
Ndị Galetia 2: 19-21 (NIV)f ezi omume sitere na iwu, mgbe ahụ Kraịst nwụrụ n'efu
19 n'ihi na site n'iwu m nwụrụ nye iwu, ka m wee dị ndụ nye Chineke. 20 A kpọgidere m na Kraịst n'obe. Ọ bụghịzi m dị ndụ ọzọ, kama ọ bụ Kraịst nke bi n'ime m. Na ndụ m na -ebi ugbu a n'anụ ahụ m na -ebi site na okwukwe na Ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya ma nyefee onwe ya maka m. 21 Anaghị m emebi amara Chineke, n'ihi na ọ buru na ezi omume sitere n'iwu, ya mere Kraist nwuru n'efu.
(Ndị Galetia 3: 1-5) Ebe unu bidola site na Mmụọ, ugbu a emela ka unu zuo oke site n'anụ ahụ
1 Ndị Galetia nzuzu! Kedu onye mere gi afa? Ọ bụ n'ihu anya gị ka a kọwara Jizọs Kraịst dịka onye a kpọgidere n'obe. 2 Ka m jụọ gị naanị nke a: Ị natara mmụọ site n'ọrụ nke iwu ma ọ bụ site na ịnụrụ okwukwe? 3 Ị bụ onye nzuzu? Ebe unu bidola site na Mmụọ, ugbu a emela ka unu zuo oke site n'anụ ahụ? 4 Ị tara ahụhụ nke ukwuu ọtụtụ ahụhụ n'efu - ọ bụrụ n'ezie na ọ bụ n'efu? 5 Onye na -enye unu Mmụọ Nsọ ma na -arụ ọrụ ebube n'etiti unu ọ na -eme ya site n'ọrụ nke iwu, ma ọ bụ site na ịnụrụ okwukwe.
(Ndị Filipaị 3: 7-9) Enweghị m ezi omume nke m nke sitere n'iwu
7 Ma uru ọ bụla m nwere, agụrụ m ya dị ka mfu n'ihi Kraịst. 8 N'ezie, agụrụ m ihe niile bụ ihe efu n'ihi oke uru nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m. N'ihi ya, ahụrụ m ihe niile funahụrụ m wee gụọ ha ka ihe mkpofu, ka m wee nweta Kraịst 9 ewe chọta ya nime ya, ebe m na -enweghị ezi omume nke m nke sitere n'iwu, kama nke ahụ sitere n'okwukwe n'ime Kraịst, ezi omume nke sitere na Chineke nke dabeere n'okwukwe.
(Ndị Galetia 3: 11-14) Onweghi onye iwu ziri ezi n'ihu Chineke
11 Ugbu a, o doro anya na ọ dịghị onye ọ bụla a na -agụ n'onye ezi omume n'ihu Chineke, n'ihi na "Onye ezi omume ga -adị ndụ site n'okwukwe." 12 Mana iwu esiteghị n'okwukwe, kama "Onye na -eme ha ga -esi na ya dị ndụ." 13 Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ anyị ọbụbụ ọnụ- n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, "Onye a bụrụ ọnụ ka onye ọ bụla a kwụwara n'elu osisi bụ" 14 ka ngọzi Abraham wee rute ndị mba ọzọ n'ime Kraịst Jizọs. ka ayi we were okwukwe nweta Mọ nke ekwere na nkwa.
Ndị Rom 3: 19-25 (NIV), Temewo ka ezi omume Chineke puta ihe n'adighi n'iwu
9 Ugbu a anyị maara na ihe ọ bụla iwu kwuru ọ na -agwa ndị nọ n'okpuru iwu, ka e wee kwụsị ọnụ niile, ka ụwa niile wee zaa ajụjụ n'ihu Chineke. 20 N'ihi na site n'ọlu nke iwu ọ dịghị mmadụ ọ bụla a ga -agụ n'onye ezi omume n'anya ya, ebe iwu na -esite na ya amata mmehie. 21 Ma ugbu a emela ka ezi omume Chineke pụta ìhè n'iwu, n'agbanyeghị na Iwu na Ndị Amụma na -agba akaebe na ya- 22 ezi omume Chineke site na okwukwe na Jizọs Kraịst maka ndị niile kwere. N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche: 23 n'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. 24 emekwara ka ha zie ezi site n'amara ya dị ka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs, 25 onye Chineke wepụtara n'ihu ya ka ọ bụrụ ihe ịjụrụ ya obi site n'ọbara ya, ka okwukwe ya wee nata ya. Nke a bụ iji gosi ezi omume Chineke, n'ihi na n'ime ntachi obi ya dị nsọ ọ gafere mmehie mbụ.
Ndị Hiburu 7:11 - Ya mere ọ bụrụ na ndị nchụaja Livaị eruola izu oke nke e ji hiwe iwu ahụ maka ndị mmadụ, ihe ọzọ dị mkpa ebe ahụ bụ onye ụkọchukwu ọzọ kwesịrị ibili ka usoro Melchisedec siri dị? Ma ọ bụghị ya, akwụkwọ -nsọ gaara ekwu na ọ ga -eme dịka iwu Erọn siri dị.
Ndị Hibru 7:12 Ebe ọ bụ na e nwere mgbanwe n'ọkwa nchụ -aja, otu a kwa ka iwu gbanwere.
Hib 7: 18 - Maka mgbanwe nke mere na iwu ochie mere n'ihi adịghị ike ya na n'ihi na ọ ghọwo ihe na -abaghị uru.
Hib 7:19 - Maka iwu emeghị ihe ọ bụla zuru oke, mana olileanya ka mma bịara n'ọnọdụ ya, nke anyị na -esite na ya bịaruo Chineke nso.
Hib 8:7 - Maka a sị na ọgbụgba ndụ nke mbụ enweghị ntụpọ, mgbe ahụ ọ gaghị adị mkpa maka nke abụọ.
Ndị Hibru 8: 8 - N'ihi na ọ hụrụ mmejọ ha wee sị, Lee, ụbọchị na -abịa, ka Onye -nwe kwuru, mgbe m ga -eme mee ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ zuo oke ya na ulo Israel na ulo Juda;
Ndị Hibru 8:9 Ọ bụghị dị ka ọgbụgba ndụ mụ na nna nna ha gbara n'ụbọchị m jidere ha n'aka wee kpọpụta ha n'ala Ijipt; ọ bu kwa n'ihi na ha erughi n'ọb covenantub mya -ndum, na ajum ha, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta.
Heb 8:10 - N'ihi na nke a ga -abụ ọgbụgba ndụ mụ na ụlọ Izrel ga -agba mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, ka Onye -nwe kwuru: M ga -etinye iwu m n'obi ha, m ga -edekwa ya n'obi ha; M'gābu -kwa -ra ha Chineke, ha onwe -ha gābu -kwa -ram otù ndi.
Hib 8:13 - N'ihi na o kwuwo maka ọgbụgba ndụ ọhụrụ; nke mbụ emewo ochie, ma nke merela ochie na nke na -anaghị agwụ agwụ na nso nso mbibi.
Ndị Hibru 9: 8 - Site na nke a, Mmụọ Nsọ kpughere na a gaghị eme ka amara ụzọ ndị nsọ ọ bụrụhaala na ụlọikwuu ochie ahụ ka dị.
Ndị Hibru 9:9 Nke bụ akara maka oge ahụ, ugbu a gara aga, nke esitere n'onyinye na onyinye dị iche iche chụọ àjà nke na -enweghị ike ime ka nkọwa nkenke nke onye nyere ha zuo oke,
Hib 9:10 - Mana nke na -eje ozi naanị maka nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, na ịsa ahụ dị iche iche nke bụ emume nke anụ ahụ ma tinye ya n'ọrụ ruo oge mgbanwe..
Hib 10:1 - Maka iwu ahụ nwere onyinyo nke ihe ọma ndị gaje ịbịa mana ọ bụghị isi ihe ndị ahụ n'onwe ha; n'ihi ya, n'agbanyeghị na a na -achụ otu àjà kwa afọ, ha enweghị ike ime ka ndị na -achụ ha zuo oke.
NDI -HIBRU 10: 8 N'elu mb whene ọ siri, Àjà nile, na àjà -nsure -ọku nile, na àjà -nsure -ọku nile, na àjà nile nke nmehie, i gaghi -anara; ndị ahụ e nyere dịka iwu siri dị;
NDI -HIBRU 10: 9 Ma emesia ọ siri, Le, abiaram ime uche -gi, Chineke. N'ụzọ dị otú a, ọ kwụsịrị nke mbụ ka o wee guzobe nke abụọ.
ebook, Iwu ahụ, Ụbọchị Izu Ike na Ọgbụgba Ndụ Ọhụrụ nke Iso Ụzọ Kraịst, Sir. Anthony Buzzard